YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, August 20
BY YeYint Nge ... 8/20/20090comment
NEW YORK TIMES: Keep Myanmar sanctions
MYANMAR’s repressive government was uncharacteristically welcoming when senator Jim Webb visited last weekend. The junta released an American prisoner. Its leader, Senior Gen Than Shwe, held talks with Webb and allowed him to meet with Daw Aung San Suu Kyi, the Nobel Peace Prize winner who has been under house arrest for 14 of the past 20 years.
We hope this new attitude means Myanmar’s leaders are looking for ways to lessen their isolation and are ready to loosen their iron grip. We encourage the Obama administration to test that proposition. But it is far too early to lift sanctions on one of the world’s most authoritarian regimes.
The seven-year sentence imposed on John Yettaw after he swam acrossalake to visit Aung San Suu Kyi, uninvited, at her home was cruel. The junta used the incident to add another 18 months to her detention.
Webb is right that American policy — Washington tries to isolate the junta, while Myanmar’s neighbours pursue engagement — has failed to bring change. The administration’s policy review, on hold during Aung San Suu Kyi’s trial, must be speeded up if Washington hopes to influence the elections.
The administration must also persuade China (Myanmar’s major foreign investor), India and others to use their diplomatic and economic influence to press the generals towardapeaceful transition.
Thursday, August 20, 2009, Daily Times
Senate Human Right body condemns Myanmar leader’s detention
* Body forms fact-finding mission to probe Gojra killings
ISLAMABAD: The Senate Functional Committee on Human Rights on Wednesday condemned the detention of Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi and demanded that the government sever diplomatic ties with Myanmar’s military regime.
Inaunanimous resolution, the committee that met under the chairmanship of Afrasiab Khattak observed that Myanmar’s military rulers had not only trampled the democratic aspirations of their people, but had also ignored the demands of the international community.
The committee expressed its solidarity with the people of Myanmar in their struggle for fundamental rights and demanded that the government end diplomatic ties with the military regime in Myanmar until Kyi and other political prisoners were released and democratic rights and constitutional rule restored.
“The despotic dictatorship has crossed all limits in violating international norms of democracy, civilised governance and human rights,” the committee said.
Probe: Discussing Gojra incident, the committee condemned the killings and formedafact-finding mission consisting of senators Afrasiab Khattak (convener), Saeeda Iqbal, Surraiya Amiruddin, Hafiz Rashid Ahmed and Pervaiz Rashid to probe the incident and submitareport to the committee.
The committee vowed to make all efforts to promote human rights and curb social injustice in the country. The committee also chalked outaroadmap to work on neglected aspects of human rights, including violence against women, missing persons’ issue, bonded labour and prisoners’ sufferings.
Earlier, Human Rights Minister Syed Mumtaz Alam Gillani apprised the committee of the hurdles in the smooth functioning of the ministry. He said the ministry was facing shortage of funds, resources and manpower. The committee assured the minister of support in overcoming the difficulties.
ကွန်ပျူတာ ၅ လုံးကျောင်းသားလက်ရောက်ဖို့တိုင်းမှုးအမိန့်စောင့်နေရပုံကဒီလို.....
တရုတ်ပြည်ရွှေလီမြို့ကနေ မူဆယ်မြို့က ကျောင်းတွေကို ရွှေလီလာလည်ဖို့ဖိတ်တယ်တဲ့ ... လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်လောက်ကပေါ့ဗျာ ... အဲတာနဲ့ မူဆယ် အထက-၁၊ အထက-၂၊ အလက-၁ က ကျောင်းသား ၅ဝ၊ ဆရာ၊ဆရာမ ၂ဝ အားလုံးပေါင်း ၇ဝ ဟာ ရွှေလီမြို့ကို လေ့လာရေးခရီးသွားကြတယ် .... ရွှေလီမြို့က ကြယ် ၅ ပွင့်ဟိုတယ် ( ချင်းချိန်ဟိုတယ် ) မှာ နေ့လည်စာကျွေးတယ် ... လည်ပတ်တဲ့နေရာတွေ လိုက်ပို့တယ် ...
အဲ .. မြန်မာလေ့လာရေး အဖွဲ့တွေပြန်တော့ တရုတ်ဖက်ကနေ Lenovo Desktop Computer ၅ လုံးကို ကျောင်း ၃ ကျောင်းအတွက် ( အထက တကျောင်းကို ၂ လုံးစီ နဲ့ အလကကို တလုံးပေါ့ ) လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ ......
မြန်မာအဖွဲ့တွေပြန်လာပါပြီ ... အခု ကွန်ပျူတာ ၅ လုံးကို မြို့နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီ ရဲ့ အာဘော်နဲ့ ခေတ္တသိမ်းထားစေပါတယ် ... ရမခ တိုင်းမှုးဒီတပတ်ထဲ မူဆယ်လာဖို့ရှိတယ်တဲ့ ... အဲအချိန်ရောက်မှ ကွန်ပျူတာအကြောင်းကို တိုင်းမှုးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဆက်လုပ်မယ်တဲ့ဗျ ....
နောက်ပြီး တရုတ်က ကမ်းလှမ်းချက် ၂ ခုရှိတယ် ...
၁...ယခုလိုမျိုးမြန်မာကျောင်းသားတွေ လာရောက်လည်ပတ်သလို တရုတ်ကျောင်းသားလေးတွေကိုလည်းမူဆယ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခွင့်
၂... ရွှေလီ - မူဆယ် မောင်နှမ ကျောင်းဖွဲ့ဖို့
အထက်ပါ ၂ ချက်ကို မြန်မာဖက်ကနေ အကြောင်းပြန်တာက အထက်က သဘောမတူပါတဲ့ဗျ ... ဘယ်အထက်လဲတော့ မသိ ....
The Nearest Metro Station is the Akasakamitsuke on Ginza Line, Marunochi Line.
# Hotel is3minute walk from station.
Address of the New Otani Hotel Tokyo:
UN Ambassador Rice on the conviction of Aung San Suu Kyi
Aug. 11, 2009: Remarks to the media by UN Ambassador Rice on the conviction of Aung San Suu Kyi followingaSecurity Council stakeout. AP video
Get file with Microsoft word
NEJ / ၂၀ သြဂုတ် ၂၀၀၉
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ်၏ ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာပေစိစစ်ရေးက အပြည့်အစုံဖော်ပြခွင့်မပေးကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရသည်။
မစ္စတာဂျင်မ်ဝက်ဘ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သြဂုတ် (၁၄) ရက်တွင် ရောက်ရှိပြီး (၁၆) ရက်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ရာ မထွက်ခွာခင် ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းမှ သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးက “အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ်က နအဖအစိုးရကို အချက် (၃) ချက် တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ (၁) က မစ္စတာယက်တောကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးဖို့၊ (၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့၊ (၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ နောက်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ပြုဖို့ စတဲ့ အချက်တွေဖြစ်တယ်။ ဒီ (၃) ချက်အနက် မြန်မာအစိုးရက အချက် (၂) ချက်ကို လိုက်လျောပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဘာမှ အဖြေပြန်ပေးတာမရှိကြောင်း အဲဒါတွေ ပြောခဲ့တယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
၎င်းတို့ဂျာနယ်အနေဖြင့် မစ္စတာဂျင်မ်ဝက်ဘ်ပြောကြားသည့်အတိုင်း ရေးသားထားသည့် ဂျာနယ်မူကြမ်းကို စာပေစိစစ်ရေးသို့တင်ပြရာတွင် စိစစ်ရေးက မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်ပြောသည့် အချက် (၃) ချက်အနက် (၂) ချက်ကိုသာ ဖော်ပြခွင့်ပေးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည့် တတိယအချက်ကိုမူ ဖော်ပြခွင့်မပေးဘဲ ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း၊ အချို့ဂျာနယ်များမှာ အမေရိကန်အမတ်က တောင်းဆိုချက် (၂) ချက်သာ တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟုပင် ရေးသားကြကြောင်း အဆိုပါ အယ်ဒီတာဖြစ်သူက ပြောသည်။
ပြည်တွင်းမှ အခြားသတင်းဂျာနယ်အယ်ဒီတာတဦးကလည်း “ဆဲဗင်းဒေးမှာဆိုရင် မစ္စတာဝက်ဘ်ရဲ့ ပထမဆုံး တောင်းဆိုချက်ဟာ ယက်တောလွှတ်ပေးရေးပင်ဖြစ်သည်ပဲ ရေးထားတယ်၊ ကျန်တာမပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာက ဒေါ်စုလွှတ်ပေးရေး လူတွေက အာရုံစိုက်နေတာလေ။ သူကလည်း တောင်းဆိုပေးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ယက်တောတော့လွှတ်ပြီး ဒေါ်စုမလွှတ်ဘူးဆို ပြောစရာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် မထည့်စေတာနေမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
အခြားပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကသတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာအချို့ကလည်း ၎င်းတို့ဂျာနယ်များလည်း အလားတူပိတ်ပင်ခံရကြောင်း၊ မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံသည့်ဓာတ်ပုံကိုလည်း မျက်နှာဖုံးတွင် ထည့်ခွင့်မပေးဘဲ အတွင်းစာမျက်နှာမှာသာ ထည့်ခွင့်ပေးကြောင်း ပြောကြသည်။
အဆိုပါသတင်းကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့် ယခုတပတ်ထုတ် ဝီးကလီးအလဲဗင်းဂျာနယ်၊ မြန်မာပို့စ်၊ ဗီးနပ်စ်၊ ဆဲဗင်းဒေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းမ်၊ မြန်မာတိုင်းမ်၊ ပေါ်ပြူလာနယူး စသည့် ဂျာနယ်အားလုံးတွင် မစ္စတာဂျင်ဝက်ဘ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့်အချက် ဖော်ပြထားခြင်း မတွေ့ရကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးက ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင်မူ အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ ရေးသားဖော်ပြခြင်း မရှိပေ။
“ကြာပြီဗျ။ ထောင်ဝင်စာသွားမတွေ့နိုင်တာ (၅) လကျော်သွားပြီ။ အဓိကကတော့ လေယာဉ်ပျောက်တာပဲ။ ရန်ကုန်-တာချီလိတ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေ ဖျက်ထားတယ်။ ကားလမ်းက သွားမယ်ဆိုလည်း မိုးတွင်းဆိုတော့ မလွယ်ဘူး။ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ ငွေလွှဲနဲ့ ငွေပဲပို့နိုင်တယ်ဗျ။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတော့ သူ့ဘာသူ ဆင်ခြင်နေရတယ်တဲ့။ သူရေးတဲ့စာထဲမှာ ပါတာပေါ့။ အရင်ကလည်း နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ လူတွေဆိုတော့ ကျန်းမာရေးကတော့ မကောင်းကြပါဘူး” ဟု ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းဖြတ်ထောင်အတွင်း အထိန်းသိမ်းခံနေရသော (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး၏ညီ ကိုအောင်ထွန်းက ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တံခါးပိတ်တရားခွင်များမှ ထောင်ဒဏ် (၆၅) နှစ်အထိ ချမှတ်မှုများပြု၍ နယ်ဝေးထောင်များသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ မိသားစုများအဖို့ ထောင်ဝင်စာတွေ့ရန် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
(၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ကိုဌေးကြွယ်၏ ညီမ မမီးမီးကြွယ်ကလည်း “ဒီလထဲသွားတွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်း မတွေ့ရဘဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတာလေ” ဟု ပြောသည်။
ဘူးသီးတောင်ထောင်တွင် အထိန်းသိမ်းခံထားရသော ကိုဌေးကြွယ်ထံ ပြီးခဲ့သည့်လ (၇) ရက်တွင် ထောင်ဝင်စာတွေ့ရန် သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း စစ်တွေလေယာဉ်ကွင်းပေါ်သို့ ရောက်ပြီးမှ လေယာဉ်မဆင်းနိုင်သဖြင့် ရန်ကုန်သို့ လှည့်ပြန်ခဲ့ရကြောင်း မမီးမီးကြွယ်က ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံထောင်တွင် အထိန်းသိမ်းခံနေရသော ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ယမန်နေ့က ထောင်ဝင်စာ သွားရောက် တွေ့ဆုံလိုသည့် အစ်မဖြစ်သူမှာလည်း လေယာဉ်ခရီးစဉ်အဆင်မပြေသဖြင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ၂၀၀၇ ခု စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အရေးအခင်းအပြီးတွင် (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအား နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ပြီး နယ်ဝေးထောင်များသို့ ပို့ထားရာ မိသားစုများ အနေဖြင့် ထောင်ဝင်စာတွေ့ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေကြသည်။
မကြာမီအတွင်း နအဖစစ်အစိုးရက အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးတော့မည်ဆိုသည့် သတင်းများ ပေါ်ထွက်နေပြီး စရဖအဖွဲ့များက ထောင်များအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးသမားများအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိုကိုကြီး၏ညီ ကိုအောင်ထွန်းက “ကျနော်တို့လည်း အဲလိုတွေတော့ ကြားနေရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်မယ်၊ မလွှတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်ရောက်မှ ကိုယ်ဟင်းချနိုင်မယ့် ကိစ္စပါ” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၂,၀၀၀) ကျော်ရှိသည်။
“အာရှတော်ဝင်က ပိုင်ရှင်တွေရော၊ ဆရာဝန်တွေရော အားလုံးအဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးကြပါတယ်။ အခုတော့ သက်သာလာပါပြီ။ တပတ်တခါတော့ ပြန်ပြရမယ်။ ဖုန်းပြောတာတွေ၊ လျှပ်စစ်မီးအသုံးပြုတာတွေ မလုပ်ဖို့ အထူးသဖြင့် ဘယ်ဘက်ခြမ်း မလှုပ်ရှားမိစေဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်” ဟု အတူနေသူ ကိုသက်ဦးနိုင်က ပြောသည်
အသက် (၇၉) နှစ်ကျော်ရှိ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စတင်တည်ထောင်စကပင် ပါဝင်ခဲ့သည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသော နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့် စစ်အစိုးရက ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ထောင်ချထားခဲ့သည်။
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပွင့်လင်းရဲဝံ့စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သဖြင့် နအဖစစ်အစိုးရ၏ အငြိုးထားခြင်းခံရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထောင်အတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုံလောက်စွာမရရှိခဲ့ဘဲ နှစ်ပေါင်း (၁၉) နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၃) ရက်တွင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
အစိုးရပညာတော်သင်အဖြစ် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် စာနယ်ဇင်းပညာသင်ယူနေစဉ် “ဒို့ပြည်သတင်း”ဟူသည့် လက်နှိပ်စက်ရိုက်သတင်းစာတစောင်ကို ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ထုတ်ဝေကာ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာများထံ စာတိုက်မှတဆင့် ပေးပို့ခဲ့ဖူးသည့် သတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်သည်။
၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလှုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ယူနက်စ်ကိုမှ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ဆု၊ ကမ္ဘာ့သတင်းစာများအသင်းကြီးက လွတ်လပ်မှု ရွှေကလောင်ဆု၊ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့က လွတ်လပ်မှု ရွှေကလောင်ဆုများ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
မေတ္တာကျေးရွာ၌ နေထိုင်ခွင့်စာရင်းဝင်သူများသည် မယူမနေရ အဆိုပါအိမ်ရာများတွင် နေထိုင်ကြရပြီး နေရေး စားရေးအခက်အခဲများကို ပြင်ပသို့ သတင်းပေါက်ကြားပါက ဖမ်းဆီးမည်ဟု သတင်းလွှင့်ထားခြင်းကြောင့် ရွာခံတို့မှာ အကြောက်လွန်နေကြသည်။
ရွာသားအများစုမှာ စားရေးအခက်အခဲကြောင့် နာဂစ်လေဘေးအလှူ ဒန်အိုးဒန်ခွက်ပါမကျန် ပေါင်ရောင်းနေပြီး ကျေးရွာနေအမျိုးသမီးအားလုံးနီးပါးမှာ ဆံပင်များ ဖြတ်ရောင်း၍ (ကတုံးဆံပင်) ဆံတိုများနှင့်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဆံပင်အရှည်၊ အကျွတ်ဝယ်ယူသူတို့သည် ဒေးဒနောကျေးရွာ၊ ညောင်ငူကျေးရွာများသို့ပင် မ၀င်ကြတော့ဘဲ မေတ္တာကျေးရွာတွင် နေ့ညမပြတ် တရုန်းရုန်းရှိနေကြကြောင်း ရွာခံများက ပြောသည်။
ယခင်လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာ ကျေးရွာများနှင့် မေတ္တာကျေးရွာသည် (၃၀၄) မိုင် ဝေးကွာနေခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အိမ်ရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရွာခံများက ပြောသည်။ မေတ္တာကျေးရွာနှင့် ရွာချင်းကပ်ကျေးရွာများမှာ ဆယ်ဂဏန်းမျှသာရှိသည်။
မေတ္တာကျေးရွာသည် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့၊ ညောင်ငူကျေးရွာမှ (၆) ဖာလုံအကွာတွင်ရှိပြီး အိမ်ရာ (၇၃၀) လုံးရှိကာ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဧက (၁၀၀) ကျော်ခန့်ရှိသည့် အဆိုပါမေတ္တာကျေးရွာသည် ဒေသခံတောင်သူများ ယခင်က ထင်းခုတ်၊ တောပန်းခူးနေသည့် နွားစားကျက်မြေရိုင်းများဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကြက်ဆူတောစီမံကိန်းဟုဆိုကာ လုပ်ငန်းရှင်များက တောရှင်း၊ မြေညှိပြီး (၃-၄) နှစ်ခန့် ကြက်ဆူပင်များ စိုက်ပျိုးခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ နာဂစ်အလွန်၌ သီရိလင်္ကာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် အလှူရှင်များက အိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန် ၎င်းမြေနေရာကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
မေတ္တာကျေးရွာ စတင်ဆောက်လုပ်စဉ်က ညောင်ငူကျေးရွာဒေသ အာဏာပိုင်တို့က အုပ်ချုပ်ပြီး ယခုအခါ အိမ်ထောင်စု ဇယားများ သီးခြားခွဲထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်၍ သူ့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သူ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဂျိုးဇက်ဘောလ် (Joseph Ball)
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 42 မိနစ်
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ်၏ မကြာသေးမီက လာရောက်ခဲ့သော ခရီးစဉ်ကြောင့် မြန်မာ့အဓိက ဒီမိုကရေစီရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် အတိုက်အခံတို့အကြား၊ ထို့ပြင် အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် သူတို့ကို အဓိက အားပေးထောက်ခံနေသော နိုင်ငံတကာမှ အားပေးထောက်ခံနေသူများအကြား ပင်ကိုယ်အက်ကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသနေပြီဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်၏ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံပါတီက လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းဘောင်အတွင်း တိုက်ပွဲအောင်မြင်မှု အခွင့်အလမ်း အများဆုံး ရစေရန် ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် အခြေခံတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ထိုအက်ရာများကို ချက်ချင်းလက်ငင်း ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။
တိုတိုပြောရလျှင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတို့သည် ယူဆချက်နှစ်ခုပေါ်တွင် လုံးလုံးကြီး ပုံထားသောကြောင့် ဤသို့ချိနဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမတခုမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဟာဗျူဟာ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်အညီ လိုက်လုပ်ရခြင်း၊ လိုအပ်မှုအရ နားလည်ပေးရခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ အမေရိကန်၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတို့၏ အကျိုးစီးပွားသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့်ပင် တထပ်ထည်းကျနေသည်ဟု မှတ်ယူ နိဂုံးချုပ်ထားခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်ကို ဦးစွာပြောပါမည်။ လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်၏ အကျိုးစီးပွားသည် အတွေးအခေါ်အရ မပြောင်းမလဲတည်ရှိနေပြီး၊ ထိုအတွေးအခေါ်မှာ ၂၀ ရာစု ပထမထက်ဝက်တွင် မြစ်ဖျားခံတည်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အိုဘားမား အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချဉ်းကပ်စဉ်းစားပုံမှာ လိုရင်းတိုရှင်းပြောရလျှင် ဒေသတွင်း ကောင်းစွာအထိုင်ကျပြီးဖြစ်သော အမေရိကန် မူဝါဒများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရေး ဖြစ်သည်။ အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်သော ယူရေးရှားကုန်းမြေကြီးတွင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော ပြိုင်ဘက်အင်အားကြီး နိုင်ငံများကို ထိန်းချုပ်ဟန့်တားထားရေးဟူသော အချက်ကတော့ ပြောင်းလဲမသွားပါ။
သက်ဆိုင်သူအားလုံး ဤအချက်ကို မမေ့သင့်ပါ။ အိန္ဒိယအမျိုးသား အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာတွင် အောင်မြင်မှု အနည်းငယ်သာ ရခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ သြဇာသက်ရောက်မှု ကြီးမားလာခြင်းကို ဟန့်တားထားနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ အရေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေဓာတ်ငွေ့သိုက်မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ၀ယ်ယူနိုင်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့။ အမေရိကန်၏ ဒီမိုကရေစီရေး၊ စစ်ရေး မဟာမိတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပီကင်း၏ ကြီးထွားလာနေသော သြဇာအာဏာကို တန်ပြန်ထားနိုင်ခြင်းက နယူးဒေလီက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို ခပ်အေးအေး ထောက်ခံနေခဲ့သော်လည်း ၀ါရှင်တန်အဖို့ အရေးပါသော ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတရပ်အဖြစ် ရှုမြင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ ပြောင်းလဲသွားသည့်အပိုင်းမှာ အမေရိကန်၏ ပဓာနကျသော ပန်းတိုင်သို့ ပေါက်ရောက်အောင်မြင်ရေးအတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များ ရှာဖွေရာတွင် ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေး စသော လေလုံးမိုးလုံး စကားလုံးများ ခေတ်စားဆဲ ဖြစ်နေမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ နေ့ချင်းညချင်း ပျောက်ကွယ်သွားဦးမည် မဟုတ်သေးသော်လည်း၊ အမှန်အတိုင်း ပြောရပါမူ အတွေးအခေါ်က အနည်းငယ်သာ အရေးပါတော့မည်ဖြစ်ပြီး ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုက ပိုလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အတွက် ပထမဆုံးနှင့် အရေးအပါဆုံးကိစ္စမှာ အမေရိကန် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ စသည်တို့မှာ အမေရိကန်၏ အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သူလိုလားသော လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယေက်၊ မူဝါဒတခုခုကို တရားဝင် မှုပေးအပ်ချီးမြှင့်ရာတွင် အသုံးချသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာမျှသာ ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ မြန်မာ့အတိုက်အခံတို့က အဆုံးသတ်ရလဒ် တခုတည်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားသည်ဆိုလျှင် သူတို့အကျိုးစီးပွားနှင့် အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားမှာလည်း ခွဲခြားရန် ခက်ခဲပါသည်။ သို့သော် အထက်ဖော်ပြပါ အတိုက်အခံအုပ်စုတွင် အတော်အတန် များပြားသော၊ သြဇာရှိသော အ၀န်းအ၀ိုင်းအတွက်မူ ရည်မှန်းချက်သို့သွားရာ နည်းလမ်းသည် ရည်မှန်းချက်လိုပင် အကဲပါသည်၊ အရေးပါသည်။ ယင်းအချက်သည်ပင် ယနေ့ မြန်မာ့အတိုက်အခံတို့နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော တင်းမာမှု၏ အရင်းခံအကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဘုရ်ှအစိုးရသက်တမ်း ၈ နှစ်ကာလကတော့ ၀ါရှင်တန်၏ မြန်မာ့အရေးတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ၊ မြန်မာ့ဒီိမိုကရေစီ အတိုက်အခံတို့၏ အမာလိုင်း အသံတို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ပြောဆိုကျင့်ကြံခြင်းများကသာ လွှမ်းမိုးထားခဲ့သည်။ `အမှန်´ နှင့် `အမှား´ တို့၏ တိုက်ပွဲအဖြစ် ကျယ်လောင်စွာ ပြောဆိုသာယာနေခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေသော တရုတ်၏ သြဇာအာဏာနှင့် ရုရှ၏ သြဇာအာဏာ အနည်းအကျဉ်းတို့ တည်ရှိနေခြင်းကို တန်ပြန်ရန် နည်းလမ်းအဖြစ် အာဏာရ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ချက်ချင်းလက်ငင်း ဖြုတ်ချဖယ်ရှားရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အိုဘားမားအစိုးရကမူ ထိုတခုတည်းသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရေးအတွက် အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် အမေရိကန်၏ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို အထောက်အပံ့ပြုမည့် အခြားတပါးသော နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလိုနေခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နှစ်ကိုယ်ကြား တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့စဉ်ကလည်း ဆီိနိတ်တာ ၀က်ဘ်သည် သူ့နိုင်ငံအတွက် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသော စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ရာဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကြီးထွားလာနေသော တရုတ်၏ သြဇာအာဏာကို အထူးအလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းသည် လိုရင်းကျ၍ သွေးထွက်အောင်မှန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမေရိကန် အကျိုးစီးပွားကို ၀ါရှင်တန် အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက မြန်မာ့အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်သို့ ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထူးခြားသည်မှာ ဤသို့ စော်ကားပြောဆိုမှုကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်က ပယ်ချလိုက်သည်ဟု သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ဒေသတွင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံသည် မြန်မာ့အနာဂါတ်အတွက် ဆက်လက်အရေးပါနေဦးမည် ဖြစ်သည့်အတွက် အမနာပ သွားပုပ်လေလွင့် မပြောသင့်ကြောင်း သူ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤတုံ့ပြန်ပြောကြားချက်က မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြား အံချော်နေပြီဆိုသည်ကို အချက်ပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သူမ၏ အမိနိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား တယောက်အနေနှင့် ထိုသို့ သင့်လျော်စွာ ပြောကြားလိုက်ပုံလည်း ရပါသည်။
ဤအချက်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတို့အတွက် ဒုတိယမြောက် အရေးပါသည့် ခြေလှမ်းမှားမှုကို ဦးတည်သွားစေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် သူတို့လည်း ပြောနိုင်သည်ဟု အထင်ရောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
မကြာသေးခင်လများအထိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အပြုသဘောဆက်ဆံလိုသည်များ အတိုက်အခံတို့တွင် အနည်းအကျဉ်းမျှသာ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိသော်လည်း အတိုက်အခံအများစုကြီးနှင့် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းအများကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နှစ်ရှည်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကြောင့် ပီကင်းနှင့် ယင်း၏ မူဝါဒများကို ပြက်ရယ်ပြုခြင်းသာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် အလေးဂရုပြုမှု၊ အချိန်၊ ငွေကြေး အားလုံးကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်၏ ဆန္ဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံး ရေရှည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟု သူမ ထင်မြင်သော အချက်နှင့် ဆန့်ကျင်စွာပင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသို့ဆို၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ အကျိုးစီးပွားများ တထပ်ထည်း ကျသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်တို့နှင့် ပီကင်းအကြား ဆက်ဆံရေးတွင် ပဋိပက္ခများ တိုးပွားအောင်လုပ်ခြင်းသည် မြန်မာပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကိုသာ ပေါ်ပေါက်စေလိမ့်မည်။
တရုတ်ကလည်း အမေရိကန်လိုပင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ စိတ်ဝင်စား စိုးရိမ်ပူပန်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတို့အတွက် မိမိတို့၏ သြဇာအရှိန်အ၀ါကို ကျဆင်းအောင်လုပ်ခြင်းပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
မြန်မာအတိုက်အခံတို့က ပီကင်းအပေါ် အမနာပပြောဆိုနေခြင်းသည် နိုင်ငံတနိုင်ငံ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်၏ ကြေညာထားသော အကျိုးစီးပွားကို အလုပ်အကျွေး ပြုနေသည်ဆိုသည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှုတခု မဟုတ်ပါ။ မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ ပီကင်းနှင့် နေပြည်တော်တို့အတွက် အတိုက်အခံတို့ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၏ လက်ကိုင်တုတ်များအဖြစ် ပြောစရာ ရသွားတော့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင် ဗိုလ်ချုပ်များအတွက် အဓိကအာဏာစက်ဖြစ်သော မြန်မာ့အမျိုးသားရေး ၀ါဒအတွက်လည်း ရန်သူတော်တပါး ဖြစ်သွားတော့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားချက်အပြင် ဆီနိတ်တာဝက်ဘ်၏ ခရီးစဉ်အပြီး ဘန်ကောက်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည့် နောက်ထပ်ကိစ္စရပ်တခုက ပို၍ပင် ပွဲဆူသွားစေသည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ လျှော့ပေးသည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုသည်မှာ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရာ၌ အတိုက်အခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် အဓိကလက်နက် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဤအချက်သည် အတိုက်အခံ လောကအကြား အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့သည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပြောပါဘဲ ပြောသည်ဟု မှားယွင်းကိုးကား ပြောဆိုရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပို၍ဖြစ်နိုင်သည်မှာ အတိုက်အခံတို့၏ အခြေခံအုတ်မြစ်အတွင်း ပေါ်ထွက်လာဖွယ် ရှိနေသော ကွာဟမှုကြီးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ စကားတခွန်းဖြင့် ပြန်လည်ချေဖျက်ပစ်ရန် အတိုက်အခံတို့၏ ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပြောရဦးမည်ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရုတ်ပြည်အပေါ် ဆီိနိတ်တာဝက်ဘ်၏ ပြောဆိုချက်အပေါ် အတိအလင်း အပြတ်ငြင်းပယ် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း အပြီးတွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ပြဿနာနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း အဓိပ္ပာယ် မပြတ်မသားေ၀၀ါးသော ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းတို့ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟူသော ပြောဆိုသံများ ပေါ်ထွက်လာပြန်သည်။ ဤသို့ အသေအချာ ရွေးချယ်ထားသော စကားလုံးများကို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာကလည်း ကြက်တူရွေးလို တစာစာရွတ်၍ သူမက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအပေါ် နဂိုသဘောထားအတိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်လျက်ပင် ရှိသေးကြောင်း သက်သေပြကြပြန်သည်။
ဖြစ်နေကျအတိုင်းပင် အမှန်တရားမှာ ဤမျှ ရိုးစင်းလွယ်ကူခြင်း မရှိပါ။
ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်က တဆင့်ပြန်ပြောပြသည်ကို ကိုးကားပြောဆိုရသည်မှာ မလွယ်ကူပါ။ သူမက ပြောခဲ့သည်ဆိုသည့် `ပြည်တွင်းတွင်´ အပြန်အလှန်၊ အတုံ့အလှယ် ဆက်ဆံခြင်းများကို စစ်အစိုးရက ဦးစွာမလုပ်မချင်း ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပြဿနာကို မစဉ်းစား၊ မကိုင်တွယ်နိုင်ပါဆိုသော ပြောဆိုချက်သည် နိုင်ငံရေးအရ ရင်ကြားစေ့မှုလုပ်ငန်း တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို မလွှဲမရှောင်သာ လျှော့ပေးလာရလိမ့်မည်ဟု ယူဆနိုင်သလို၊ အတိုက်အခံတို့အတွက် အောင်ပွဲကို နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အာမ မခံနိုင်မချင်း ရှိရင်းစွဲ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု မူဝါဒကို စွဲမြဲစွာ ဆက်လက်ထောက်ခံသွားရမည် ဟူ၍လည်း ယူဆနိုင်ပါသည်။
၀က်ဘ်နှင့် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ နှစ်ဖက်စလုံးတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆိုခဲ့သမျှတို့ကို မိမိလိုသလို အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ၀က်ဘ်က သူလိုချင်သော အမေရိကန်မူဝါဒ ပျော့ပြောင်းလာစေရေးအတွက် ပြောသည်။ အတိုက်အခံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စဉ်းစားပုံနှင့် တထပ်တည်းဟု သူတို့ဆိုသော ပိတ်ဆို့အရေးယူရေး မူဝါဒမှာ သူတို့ အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ထားသော အလုပ်ဖြစ်၍ ဆက်လက်ကိုင်စွဲရမည်၊ ပြောင်းလဲပစ်၍ မဖြစ်။
ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်ဖြစ်နေသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော နည်းလမ်းများကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော အတိုက်အခံများက ပိတ်ဆို့တားဆီးနေခြင်းဖြင့် ဤဒီမိုကရေစီ အသိုင်းအ၀ိုင်းသည် အလားတူ အကျိုးရလဒ် ရရှိစေရေးတွင် မိမိတို့ကိုယ်မိမိတို့ အခြားတပါးသော မဟာဗျူဟာတို့အတွက် လိုက်လျောညီထွေ လိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ၊ အတွင်းရှိ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပြင်ပရှိ အဆက်အဆံများအကြား အပေးအယူ အလျှော့အတင်း လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင် မေးခွန်းများ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အတွေးအခေါ်အမွေကို သူမကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်နေသလော သို့တည်းမဟုတ် သူမ၏ အမည်ကိုသုံး၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရယူသုံးစွဲနေကြသလောဆိုသည့် မေးခွန်းလည်း ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ `နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ´၊ အကျင့်သိက္ခာသက်သက်တို့နှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေးတို့ကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပြီး ခက်ခဲလှသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူတို့ ချမှတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုသည့် မေးခွန်းလည်း ပေါ်ထွက်လာပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ၏ `မပြီးပြည့်စုံမှု´ သဘောသဘာဝကြောင့် ဆီနိတ်တာ ၀က်ဘ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်သည် အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိပါဟု အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်း ၃ ခုက ၀က်ဘ်ထံသို့ စာရေးသားပေးပို့ပြီး သူ၏ မြန်မာပြည် လာရောက်ရသည့်ခရီးစဉ် ရည်ရွယ်ချက်ကို မေးခွန်းထုတ်ထားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယခုနောက်ဆုံး အတိုက်အခံတို့ အသေစွဲမြဲ ရပ်တည်နေသည့် အချက်မှာ ပြေငြိမ်းရေး မဖြစ်နိုင်သော အပြုတ်တိုက်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သာ ရပ်တည်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြီးပြည့်စုံမှုရှိရေး ဟူသည်မှာ မဖြစ်နိုင်သော အချည်းနှီးအရာသာ ဖြစ်သည်ဟု သောမတ်စ် ဂျက်ဖာဆင်က ပြောဖူးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဖြစ်စဉ် ဆိုသည်မှာ နောက်ဆုံး အပြီးသတ် ဖွဲ့စည်းပုံ ဆိုသည်ထက် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကို ပုံမှန်ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်၍ တစတစ ပြောင်းလဲယူကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခြေခံဥပဒေတရပ် ရရှိရေးကို သွားရခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အတိုက်အခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ယခုလက်ငင်း လိုအပ်နေသည့်အရာမှာ မဟာဗျူဟာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သော မူဝါဒတခုရှိရေးပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသော အာဏာနိုင်ငံရေးတို့ကို ထင်ဟပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများမှတဆင့် အောင်မြင်မှု အခွင့်အလမ်း အများဆုံး ရစေရန် ရည်ရွယ်ချက်သို့ ရောက်စေသော လမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ပျော့ပြောင်းညင်သာမှုရှိဘို့ လိုသည်ဆိုသော အချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်စေရမည်။
မူပေါ်တွင် အသေဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း အထူးသဖြင့် မရေရာသော ယုံကြည်ယူဆချက်များပေါ်တွင် အသေဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းသည် မိမိ၏ ချိနဲ့မှုကို ပြသခြင်းသာ ဖြစ်သည်၊ အင်အားရှိမှုကို ပြသခြင်း မဟုတ်ပါ။
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 02 မိနစ်
နယူးဒေလီ။ ။ 'အမြဲစိမ်းတောမှာ အချစ်ရှာသူ' အမည်ရှိ မြန်မာစာတန်းထိုး ကချင်စကားပြော ဇာတ်ကားကို ရန်ကုန်မြို့၌ မနက်ဖြန်တွင် ရုံတင်ပြသမည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာစာတန်းထိုး ကချင်ဇာတ်ကားကို ရန်ကုန်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ရွှေမန်းရုပ်ရှင်ရုံ၌ မနက်ဖြန်မှ စတင်ကာ ရက်သတ္တပတ်ကြာ ရုံတင်သွားရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒါက ရန်ကုန်မြို့မှာ ပထမဦးဆုံး ရုံတင်ခြင်းဖြစ်သလို ရွှေမန်း (ရုပ်ရှင်ရုံ) အတွက်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ ကချင်ဆိုတာလည်း တိုင်းရင်းသားတခုပါပဲ။ မြန်မာပြည်ထဲက အကုန်လုံး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား အတူတူပဲဆိုတော့ အားပေးတဲ့အနေနဲ့ တင်ပေးတာပါ” ဟု ရွှေမန်းရုပ်ရှင်ရုံမှ မန်နေဂျာ မစန္ဒာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် လူငယ်များ၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို အခြေတည်၍ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့စရိုက်များကို အဓိက ဦးစားပေးကာ ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤဇာတ်ကားကို ထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်သည့် ဒါရိုက်တာ ဂျီဇုံးကီက ရိုက်ကူးပြီး၊ မင်းသား နော်မိုင်၊ မုန်ဆန်နှင့် မင်းသမီး ဆိုင်းဂျာ၊ ဂျာဘောက်၊ ခေါန်လုံတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ကြည့်မြင်တိုင်ရှိ CMP (Char Multi-Media Production) တွင် တည်းဖြတ်ပြီး၊ Studio-D တွင် အသံဖမ်းယူသည်။
CMP မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ဒီကားမှာ ရေခဲတောင် ရှုခင်းတွေ ရိုက်ပြထားတယ်။ အခုလို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်လောကကို ၀င်ရောက်လာတာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါ” ဟု ပြောသည်။
ပရိသတ်အားပေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မစန္ဒာက “ဒါက ပထမဦးဆုံးရုံတင်တယ်ဆိုတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုက ပြောလို့တော့ မရသေးပါဘူး။ သူတို့က ကချင်ဇာတ်ကားဆိုပေမယ့် ကိုရီးယားကားနဲ့ တူတယ်လေ။ အထိုက်အလျောက်တော့ အောင်မြင်မယ် ထင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အလားတူ ဒါရိုက်တာ အောင်ကိုလတ်ကလည်း ကယားပြည်နယ်ရှိ ပဒေါင်လူမျိုးများအကြောင်း မကြာသေးခင်က ရိုက်ကူးခဲ့သေးသည်။
“ပြီးတော့မှာပါ။ အခု ကျနော်တို့ နောက်ခံတေးဂီတ တီးပြီး အသံသွင်းနေပါတယ်” ဟု ဒါရိုက်တာ အောင်ကိုလတ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 44 မိနစ်
“လယ်တဧကကို ၂ဝဝဝဝ နှုန်းပေးပြီးတော့ ယူလိုက်သလို ဖြစ်နေတယ်။ လယ်သမားတွေကိုလည်း အလုပ်မခိုင်းတော့ဘူး။ လယ်တဲတွေကိုလည်း အတင်းဖျက်ခိုင်းနေတယ်။ အဲဒါကို လယ်သမားတွေက မကျေနပ်ဘူး” ဟု အန်အယ်ဒီ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ တောင်သူလယ်သမားလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထူး၊ Dagon International၊ ပင်လယ်ကိုးသွယ်၊ good brother၊ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး၊ ရွှေနဂါးမင်း၊ အေဒင်ကုမ္ပဏီ စသည်တို့ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုကျော်က လယ်သမားနှင့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်အရ လယ်ပိုင်ရှင်များက လယ်ယာထွက်ကုန် အကျိုးအမြတ်၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမည်ဖြစ်ကာ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွင်း အလုပ်သမားအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါက သီးသန့် လုပ်အားခ ရရှိမည်။
ထို့အပြင် လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရမည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်များ အားလုံးကို ကုမ္ပဏီက ကျခံမည်ဖြစ်ကာ၊ လယ်ယာထွက်ကုန် အကျိုးအမြတ်၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရယူမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ကုမ္ပဏီများက ပေါက်ဈေးထက် လျှော့ပေးဝယ်သည့်အပြင် လယ်သမားများကို လယ်လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်ဆင်းခိုင်းခြင်း မရှိတော့ဘဲ၊ လယ်တဲများကိုပါ ဖျက်ခိုင်းနေသည်ဟု သရက်ပင်ချောင် ကျေးရွာမှ လယ်သမားများက စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ အန်အယ်ဒီသို့ လာရောက်တိုင်ခဲ့ကြသည်။
အစပိုင်းက နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်အတိုင်း နောက်ပိုင်း၌ မလုပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သို့သော်လည်း ထိုက်သင့်သည့် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူများလည်း ရှိနေကြောင်း အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီတခုမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
“စာချုပ်ကို အစပိုင်းက သဘောတူထားတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက ၂ သောင်း ပေးတယ်။ လာမလုပ်နိုင်တဲ့ လူတွေကတော့ ရသလောက် ယူလိုက်တာပေါ့နော်။ တချို့လည်း ပေါင်းစိုက်တာတော့ ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပထမ စာချုပ်အတိုင်း တပုံစံတော့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“မကျေမနပ် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေတာကတော့ အရင်တုန်းက လယ်ဈေး သက်သာတုန်း ဝယ်ပြီး လုပ်ကြတဲ့ လူတွေကတော့ ဆုံးသွားတယ်လို့ ပြောကောင်း ပြောမှာပေါ့။ ကုမ္ပဏီတွေပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ လူအများနဲ့ လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာ အားလုံး ကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့က ခက်တာပေါ့” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ငွေပေးချေမှု အရှုပ်အရှင်းများ ဖြစ်နေသည့် လယ်များမှာ စိုက်ပျိုးရေးအထူးဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေသော ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ သရက်ပင်ချောင်၊ ညောင်ပင်၊ ကြည်စု၊ လေးထောင့်ကန်၊ သုံးခွကျေးရွာများမှ တောင်သူလယ်သမား ၁၆၀၀ ဦးကျော်၏ လယ်ဧက ၈၈၀၀ ကျော်ဖြစ်ကြောင်း အန်အယ်ဒီ တောင်သူလယ်သမားလုပ်ငန်း အဖွဲ့က ပြောသည်။
ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လယ်ဖိုးငွေ ပြန်အန်းခံရသူထဲမှ လယ်သမားအချို့က တာဝန်ခံပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO သို့ တိုင်ကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 17 နာရီ 20 မိနစ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကမ္ဘာ့ငွေကြေး အကြပ်အတည်းကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ ကမ္ဘာ့ပဲဈေး ထက်ဝက်ခန့် ရုတ်တရက် ထိုးကျသွားရာမှ အဓိက ပဲဝယ်ရောင်း ကုန်သည်ကြီး ၇ ဦးသည် ပေးရန် အကြွေးများစွာ ရှိနေသည်ကို အကြွေးရလိုသူ ကုန်သည်များက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တရားရုံးများမှတဆင့် တရားစွဲဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ရရန်ရှိသူ ၇၉ ယောက်က တရားစွဲပြီးပြီ။ ဒီက ဘာမှ လုပ်မပေးတော့ဘူး။ ၇ ယောက် ရှိတယ်။ ကိုဖြိုးကြိုင် မပါဘူး။ ကျန်တဲ့ ၆ ယောက်ကို တရားစွဲကြတယ်။ စမ်းချောင်း၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လမ်းမတော်၊ ကျောက်တံတား၊ လှိုင်မှာလည်း စွဲတယ်” ဟု ရန်ကုန်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ကုန်သည် စက်မှု အသင်း၏ ဖျန်ဖြေရေး ကော်မတီက ပဲကုန်သည်များ၏ ရရန်နှင့် ပေးရန် ရှိသည်များကို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးနေခြင်းကို ယခုလအတွင်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး ရရန်ရှိသူ ပဲကုန်သည်များကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များအလိုက် တရားစွဲ၍ တောင်းဆိုကြရန် ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ခင်ဗျားတို့ ရရန် ရှိတဲ့သူက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် တရားစွဲရမယ်။ ကိုဖြိုးကြိုင်ဆိုရင် ကိုဖြိုးကြိုင်ကို စွဲ။ ကိုမင်းနိုင်ဆိုရင် လမ်းမတော်ကို စွဲ။ Future King ဆိုရင် ပန်းဘဲတန်းမှာ စွဲ။ ကေဘီ ကျော်ဝင်းဆိုရင် ကျောက်တံတားမှာ စွဲ” ဟူ၍ ရရန်ရှိသူများကို ဖျန်ဖြေရေး ကော်မတီက ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု ဘုရင့်နောင် ပဲပွဲရုံ ပိုင်ရှင်က မဇ္ဈိမကို ဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားသို့ ပဲတင်ပို့သူများက မြန်မာ့ပဲဈေးကွက် ထုံးစံအတိုင်း ကြိုရောင်း ကြိုဝယ်များ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ပဲဈေး တတန်လျှင် ကျပ် ၇ သိန်း ဝယ်ယူထားရသော်လည်း ကျပ် ၃ သိန်းဖြင့် သာရောင်းချခဲ့ရခြင်းက ယခုကဲ့သို့ ပဲကုန်သည်ကြီးများ အကြွေးများစွာ တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပဲဖိုးငွေ ပေးရန်ရှိသည့် ပဲကုန်သည်ကြီး ၅ ဦးပိုင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကုန်သည်စက်မှု အသင်းက ကြီးမှူး၍ လေလံတင်ရောင်းချပြီး ရရန်ရှိသူများကို တချို့တဝက် ခွဲဝေပေးခဲ့သေးသည်။
ယင်းသို့ ခွဲဝေပေးပြီးနောက် ကျန်ရှိသည့် ရရန်ရှိသူများကို တရားစွဲဆိုရန် အသင်း၏ ဖျန်ဖြေရေး ကော်မတီက ယခုလို ညွှန်ကြားပေးလိုက်ပြီး၊ ပဲအရှုပ်တော်ပုံကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးမှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သက်ဆိုင်ရာကို တရားစွဲဖို့ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်က ဆိုရင်တော့ ဒီမှာလာပြီး စာရင်းပေးတယ်။ ဒီက ရှေ့နေတွေနဲ့ စွဲကြတယ်။ အခုတော့ ပိတ်လိုက်ပြီ။ အရင်ကဆို တရက်ကို ၁ဝ ဦးလောက် လာကြတယ်၊ ရှင်းပေးရတယ်။ နားလိုက်တာ ၂ ပတ်လောက်ရှိသွားပြီ” ဟု အသင်း ဖျန်ဖြေရေး ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ယမန်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ ပဲထွက်ရှိမှု ၅ သန်းနီးပါးအနက် တန်ချိန် ၂ သန်းနီးပါးကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီး အိန္ဒိယသည် အဓိက ဝယ်လက်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အိမ်ထောင်စု စာရင်းများ ကောက်ခံနေ
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 17 နာရီ 19 မိနစ်
ဒါကာ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ်တချို့တွင် ပုံစံ ၁၀ ခေါ် အိမ်ထောင်စု စာရင်းများ ကောက်ခံနေကြောင်း ပြည်တွင်းမှလာသော သတင်းများက ဆိုသည်။
ယခုလ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပြည်နယ်မြို့တော် စစ်တွေ၊ ရသေ့တောင်၊ မာန်အောင်၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောနယ်များတွင် အိမ်ထောင်စာရင်းများ ထပ်မံကောက်ယူ၍ စာရင်းးကို လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“နပခ (အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်) ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းလောက်ကတည်းက ညွှန်ကြားလာတာပါ။ ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာ ဘာအတွက်ရယ်လို့ ထွေထွေထူးထူး မပါဘူး။ ပြောင်းလဲမှုရှိသော အိမ်ထောင်စု စာရင်းများကို ပြန်လည်ကောက်ယူပါရန်လို့ပဲ ပါပါတယ်။ တပြည်နယ်လုံးအတွက်ပါ။ စာရင်းကောက်တာကတော့ ဒီလထဲမှာ စတာလေ။ နောက်လ(စက်တင်ဘာလ) ပထမပတ်ကိုနောက်ဆုံးထားပြီး လုပ်ရမှာပါဟု” ဟု စစ်တွေမြို့ ပြည်နယ်ကောင်စီရုံးမှ ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
စစ်တွေတွင် ရပ်ကွက်ကောင်စီ - ရယက ဥက္ကဋ္ဌများမှ စာရင်းပြုစုကာ မြို့နယ်ကောင်စီ - မယက ရုံးသို့ ပို့ဆောင်ပေးရကြောင်း သိရသည်။
“သဘောကတော့ဗျာ၊ အိမ်ပေါက်စေ့ လိုက်မသွားတော့ဘူး။ ဆယ်အိမ်မှူးတွေကို အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ အတိုးအလျှော့ လုပ်စရာလိုတဲ့ အိမ်လောက်ကိုပဲ ဆင့်ခေါ်ပြီး ပြင်လိုက်တယ်။ ကျန်တာတွေ အရင်အတိုင်းပဲ ဆိုတော့ စာရင်းဟောင်းတွေကိုပဲ ပြန်လုပ်မယ်” ဟု စစ်တွေမှ ရယက ဥက္ကဋ္ဌတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခုလို အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ခံနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်တွေ ရယက ဥက္ကဋ္ဌက “ဘာရည်ရွယ်ချက်ရယ်လို့တော့ သေသေချာချာ မပြောနိုင်ဘူး။ ညွှန်ကြားချက်မှာလည်း ဘာထွေထွေထူးထူး မပါဘူး။ ကျနော်တို့ အထင်တော့ ၂၀၁၀ (ရွေးကောက်ပွဲ) နဲ့တော့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များတွင်လည်း ယခုလ ၇ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ စာရင်းကောက်နေသည်။
“ကျနော်တို့ဘက်မှာက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးတယ်။ လူလျှော့တယ်ဆိုရင် ဘယ်ကိုသွားလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။ တိုးတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်ကို သွားနေလို့လဲ၊ ဘာညာ စတာတွေပေါ့၊ မေးတယ်။ ကျနော်တို့ အိမ်တွေကျတော့ အဲဒီလောက်တော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဘူးသီးတောင်ဒေသခံ ဦးမြင့်သောင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ဒီဘက်မှာက (အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်) မူစလင်တွေက အဝင်အထွက် အရမ်းများတယ်။ အပြောင်းအရွေ့တွေလည်း များတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဘက်က နိုင်ငံသားတွေ မပါရအောင်လည်း သေသေချာချာ စစ်ဆေးရတယ်” ဟု မောင်တောမြို့မှ အမည်မဖော်လိုသူ ရယက ဥက္ကဋ္ဌတဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြို့နယ်ပေါင်း ၁၇ မြို့နယ် ရှိသည်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် ထိုင်းသို့ ထွက်ခွာ
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 17 နာရီ 17 မိနစ်
ချင်းမိုင် ။ ။ ချစ်ကြည်ရေး ဘောလုံးပွဲများ ကစားမည့် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် FC ဘောလုံးအသင်းသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့ လေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်သည်။
နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ဘန်ကောက်သို့ ထွက်ခွာသည့် ထိုင်းလေကြောင်းပိုင် TG 305 တွင် ကစားသမား ၂၂ ဦး၊ နည်းပြ ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်းနှင့် တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ဖြင့် ငှားရမ်းထားသည့် ပြင်သစ် နည်းပြဆရာလည်း လိုက်ပါသွားသည်။
''မနက်က လေယာဉ်လက်မှတ်က ၂၄ ယောက်စာပဲ ရတော့ အရေးကြီးတဲ့ ပလေယာ (ကစားသမား) ပဲ ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်။ ကျနော်တို့က နောက်က လိုက်မယ်'' ဟု အသင်းမန်နေဂျာ ဦးအောင်ကျော်လွင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ညနေပိုင်း လေယာဉ်နှင့်အတူ မန်နေဂျာ၊ ပြည်တွင်းသတင်းထောက် ၂ ဦး၊ အလုပ်အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးစိုင်းခင်မောင်အေး၊ ကျန်ရှိသည့် ဘောလုံးသမားများနှင့် အသင်းနည်းပြ အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၅ ဦးခန့် လိုက်ပါသွားကြမည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း သတင်းယူရန် အသုံးစရိတ် ဒေါ်လာ ၅၀၀ စီပေး၍ သတင်းထောက် ၆ ဦး ခေါ်ဆောင်သွားရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ၂ ဦးသာ သေချာသေးသည်။
“၂ ယောက်လောက်ပဲ လိုက်ဖြစ်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ပတ်စပို့ အဆင်မပြေလို့လား ဘာလား မသိဘူး။ ကွန်ဖန်း မဖြစ်သေးဘူး” ဟု ဦးအောင်ကျော်လွင်က ပြောသည်။
ယနေ့ ညနေတွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ထိုင်းဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်အသင်းနှင့် ခြေစမ်းပွဲ ကစားကြမည်။ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပတ္တရားယူနိုက်တက်အသင်းနှင့် ကစားမည်ဖြစ်ကာ၊ ၂၆ ရက်နေ့တွင်မူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသည့် တယ်ရိုဆက်ဆနာ အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်။
ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်းကြီးတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက်နှင့် အိန္ဒိယ ကလပ်အသင်း အရှေ့ဘင်ဂေါတို့ ခြေစမ်းပွဲတွင် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက်က ၃ ဂိုး၊ ၁ ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
ဘင်ဂေါအသင်းအား ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လအတွင်းက မြန်မာကလပ်အသင်း ၈ သင်း ပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ၌ ဗိုလ်စွဲခဲ့သည့် မန္တလေး ရတနာပုံ FC အသင်းက ၂ ဂိုး၊ ၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
လာမည့်လအတွင်း ကျင်းပမည့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် အဖွင့်ပွဲစဉ်တွင် အသင်း ပရိသတ်များကို ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက်၏ အင်္ကျီအထည် တသောင်း အခမဲ့ ဝေငှသွားမည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် အသင်းအတွက် အကျိုးပြုခဲ့သည့် ကစားသမားများကို ဦးစားပေးကာ လစာများ တိုးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုအထဲမှ မျိုးမင်းထွန်း၏ လစာမှာ ၁၅ သိန်းနှင့် ကြည်လင်း၏ လစာမှာ ၁၀ သိန်း ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် FC ကို မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် စီးပွားရေးသမားကြီး ဦးတေဇက ပိုင်ဆိုင်သည်။
Thursday, 20 August 2009 15:23 ကိုထွေး
အကျယ်ချုပ်ကျနေသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အတွင်းသို့ ရေကူးဝင်ရောက်ခဲ့သူ ယက်ထောက သူ၏ အပြုအမူအတွက် နောင်တရမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ အခွင့်အရေးရပါက ယင်းကဲ့သို နောက်ထပ် အကြိမ်ပေါင်း ၁ဝဝ ထပ်မံ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းဌာနကို ပြောလိုက်သည်။
ချီကာဂို လေဆိပ်တွင် တွေ့ရတော မစ္စတာ ယက်ထော (ဓာတ်ပုံ - AP)
မစ်ဇူရီပြည်နယ်၊ ဖယ်လ်ကွန်မြို့သို့ပြန်ရန် အတွက် ချီကာဂို လေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် မစ္စတာ ယက်ထော က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အသက်ကို ကယ်တင်ရန် “နောက်ထပ် အကြိမ်ပေါင်း ၁ဝဝ လောက် ထပ်ကြိုးစားမယ်” ဟု ပြောလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထပ်မံ ထိန်းသိမ်းခံရသည့် အတွက် အလွန် စိတ်ထိခိုက်ရပါသည်ဟု ဆိုသည်။
မစ္စတာ ယက်ထော ရန်ကုန်သို့ သွားခဲ့ရခြင်းမှာ အကြမ်းဖက်သမားများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံမည်ဟု သူ၏ အာရုံတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အတွက် ဘုရားသခင်က လွှတ်၍ သတိပေးရန် ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်ခဲ့သော မစ္စတာ ယက်ထောသည် မေလ ၆ ရက် နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း ၆ နှစ် ပြည့်တော့မည့် အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
အာဏာပိုင်တို့က မစ္စတာ ယက်ထော၏ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်မှုကို အကြောင်းပြုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရား စွဲဆိုလိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူ နေထိုင်သည့် ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ ဒေါ်ဝင်းမမ တို့သည်လည်း ထိုနည်းတူ တရားစွဲခံရသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အမျိုးသမီး ၂ ဦးသည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ် ခွဲချမှတ်ခံရသည်။ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်သူ မစ္စတာ ယက်ထော လည်း ထောင် ၇ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
စီရင်ချက် ချသည့်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ကြေညာချက်တွင် “မလွှဲ မရှောင်သာဘဲ တရား စွဲဆိုမှု ပြုခဲ့ရခြင်း” ကြောင့် “စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
စီရင်ချက် ချပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ် တဦး ရောက်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင် စစ်အစိုးရက မစ္စတာ ယက်ထော ကျခံနေရသည့် ထောင်ဒဏ် သက်တမ်း တဝက် လျှော့ပေးလိုက်သည်။ ကျန်ရှိသည့် ထောင်ဒဏ်သက်တမ်းကိုလည်း ဆိုင်းငံ့၍ မစ္စတာ ယက်ထောကို အထက်လွှတ်တော် အမတ်၏ အပြန်ခရီးတွင် ထည့်ပေးလိုက်သည်။
အင်းစိန်ထောင်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက် မစ္စတာ ယက်ထောသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွင် ၂ ရက်ကြာ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့သည်။ ယမန်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့မှ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်။
Thursday, 20 August 2009 18:15 ကြည်ဝေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအနေအထားအရ ၀က်တုပ်ကွေး H1N1 ရောဂါပိုးကူးစက် ခံရဖွယ်ရှိသော လူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ရှိနိုင်သည်ဟု ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ရောဂါပိုး တွေ့ရှိရသူများနှင့် တအိမ်တည်းအတူနေ မိသားစုဝင်များ၊ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူများနှင့်အတူ လေယာဉ်တစီးတည်း စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားပြန်များ၊ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူများနှင့် အတူ ကျောင်းတက်ခဲ့သော ကျောင်းသားများနှင့် လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတချို့ မှာ H1N1 ပိုး ကူးစက်ခံရဖွယ် ရှိသည်ဟု အဆိုပါဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
“သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ကနေ ဒီနေ့အထိ ရောဂါပိုးရှိနိုင်တယ်လို့ သံသယရှိပြီး စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့သူ စုစုပေါင်း ၁၀၇၇ ဦးရှိတယ်၊ အားလုံးကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့ စောင့်ကြည့်ရုံပဲ ရှိတယ်၊ ရောဂါပိုးတွေ့ခဲ့တဲ့ သူတွေနဲ့ တအိမ်တည်းနေ မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ အဓိက ထားပြီး စောင့်ကြည့် နေပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
သြဂုတ် ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး တွေ့ရှိသူ ၂၃ ဦးရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားသည်။
ဝက်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သူမှာ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တဦးဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဖျားနာလာသဖြင့် အထူးကုဆေးခန်းမှတဆင့် အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကာ ၎င်း ဆေးရုံကြီး သီးသန့် လူနာခန်းတွင် ထားရှိကုသလျက်ရှိကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ထားသည်။
အဆိုပါကလေးမှာ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့က M-518 လေယာဉ်နှင့် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့် အတူနေမိသားစုဝင် ၂ ဦး၊ လေယာဉ်စီးခရီးသည် ၁၀၀၊ တက်ရောက်ခဲ့သော စာသင်ခန်းမှ ကျောင်းသူကျောင်းသား ၃၈ ဦး နှင့်လေဆိပ် ၀န်ထမ်း၁၃၁ ဦးတို့အား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယနေ့အထိ ၀က်တုပ်ကွေး H1N1 ရောဂါပိုး သံသယရှိသူပေါင်း ၁၇၆ ဦးအား ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲဌာနမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၂၃ ဦးတွင် ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ သည်ဟုလည်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိ အနေအထားအရ စောင့်ကြည့်ရမည့်သူ ၁၀၀၀ ကျော်နှင့် ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၃ ဦး ရှိကြောင်း သိရသော်လည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေထိုင်သူများမှာ အဆိုပါ ရောဂါကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ချက် များလည်း ပြုလုပ်သည်ကို မတွေ့ရကြောင်း အာရှတော်ဝင် အထူးကုဆေးခန်းမှ အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတဦးက ပြောဆို သည်။
“ဆေးခန်းလာတဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက် ဘယ်သူမှ နှာခေါင်းစည်း တပ်မလာကြဘူး၊ လူနာကော လူနာနဲ့အတူ ပါလာတဲ့သူတွေကော ဘယ်သူမှ နှာခေါင်းစည်း တပ်လာကြတာ မရှိဘူး၊ H1N1 ရောဂါပိုးကို ကြောက်ရ ကောင်းမှန်း မသိတာလား၊ ငါတို့နိုင်ငံကတော့ ရောဂါပြီးတယ်လို့များ ထင်နေကြသလားတောင် မပြောတတ် တော့ဘူး” ဟု အဆိုပါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာပြည်သူများ အနေနှင့် ကြက်တုပ်ကွေး၊ ၀က်တုပ်ကွေး စသည့် ကြောက်စရာ တုပ်ကွေးရောဂါများကို မကြောက်ရွံ့ကြခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအသိ နည်းပါးကြခြင်းမှာ အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းမှုမရှိခြင်းအပြင် မီဒီယာများ၏ အားနည်းချက်လည်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဆရာဝန်ကြီးက ပြောသည်။
ဆေးရုံဆေးခန်းများ တွင်သာမက လူစည်ကားရာနေရာများဖြစ်သော ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ၊ ဈေးများ၊ ရုံးများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ဘူတာရုံများ စသည့်နေရာများတွင် သွားလာလှုပ်ရှားနေကြသူများမှာ ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်သည်ကို မေ့လျော့နေကြဟန်တူကြောင်း ပြည်တွင်း ကျန်းမာရေး သတင်းဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာ တဦးက ဆိုသည်။
“လူတွေက မေ့နေကြပြီ၊ ဘယ်သူမှလည်း စိတ်ဝင်တစားရှိတာ မတွေ့ရတော့ဘူး။ မီဒီယာတွေမှာလည်း ကန့်သတ်ချက် ဘောင်တွေထဲကနေ လုပ်နေရတော့ စိတ်ရှိပေမယ့် မလုပ်နိုင်ကြဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
Thursday, 20 August 2009 18:35 ဟိန်းဇော်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် လက်ဖက်ရည် ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူစားသုံး သူများထံမှ စားသောက်ထားသော တန်ဖိုး၏ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ကောက်ခံရန် ဆိုင်ပိုင်ရှင် များကို သက်ဆိုင်ရာ မယက မှတဆင့် ခေါ်ယူပြောကြားထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းသို့ ခေါ်ယူအသိပေးမှုများကို ယခင်လ နောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်သူ တဦးကဆိုသည်။
“စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကို မယက ရုံးမှာခေါ်ပြောတယ်။ လာသောက်တဲ့ သူတွေ ဆီကနေ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း တောင်းရမယ်တဲ့။ ရောင်းလို့ ရတဲ့ ဘောက်ချာတွေ သိမ်းထားဖို့ မှာတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
စားသုံးသူတို့၏ အခွန်ငွေများကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းခြင်း မရှိသော စားသောက်ဆိုင်အား ကုန်သွယ်ခွန်ဥပဒေ အရ အရေးယူသွား မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းသန်းက အသိပေးပြောကြားကြောင်း ဇွန်လ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ်7Day News သတင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
စားသုံးသူ စားသောက်သွားသည့်အပေါ်တွင် ပေးရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို တလတခါ မပေးသွင်းပါက အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သို့ အရေးယူမည်ကိုမူ မသိရကြောင်း ရန်ကုန် စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်များက ပြောသည်။
ယင်းသို့ အခွန် ကောက်ခံပါက ရောင်းသူနှင့်ဝယ်ယူသူကြားတွင် အခက်အခဲများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် ကျွမ်းဝင်မှု မရှိသေး၍ အချိန်ယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း စီးပွားရေး ပညာရှင် တဦးက သုံးသပ်သည်။
ပုစွန်တောင်မြို့နယ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားသူ တဦးက “ဒီလို အခွန် ကောက်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့လိုဆိုင်တွေက ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ဆောင်ရမှာ။ သောက်တဲ့ သူတွေက အထက်က ကောက်ခိုင်းတယ်လို့ မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ” ဟုပြောသည်။
ဆိုင်ခန်းဖြင့်ရောင်းချသော စားသောက်ဆိုင်များနှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များအားလုံး အခွန်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး တလ ရောင်းချရငွေ ကျပ် တသောင်းကျော် ရရှိသော ဆိုင်များအားလုံး အကျုံးဝင်ကြောင်း7Day News သတင်း ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါကုန်သွယ်ခွန်ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်ဟု ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးကပြောသည်။
မန္တလေးမြို့မှ စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာ တဦးက “ဒီလိုလုပ်တော့မယ်ဆို စားသုံးသူ တွေကို ကြိုတင် အသိပေး ထားဖို့ လိုလာပြီ။ တချို့နားမလည်တဲ့ သူတွေရှိတယ်”ဟု ဆိုသည်။
တခြား နိုင်ငံများတွင်မူ အခွန်တမျိုး ကောက်ခံမည်ဆိုပါက အခွန်ပေးဆောင်ရမည့် သူအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် တမျိုး ပြန်လည်ခံစားခွင့်ရသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများအနေဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရမှု များပြား လွန်းနေကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင် တဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါသတင်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် မည်သည့်ဆိုင်တွင်မှ သွားရောက်မစားသောက် တော့ဘဲ မိမိအိမ်တွင်သာ စားသောက်တော့မည်ဟူ၍ ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ ပြောဆိုနေကြကြောင်း ကြားသိရသည်။
ယခုကျင့်သုံးမည့် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာပြည်သူလူထု ကြားတွင် သိရှိ နားလည်မှု အားနည်းသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည် မိမိတို့၏ မြို့နယ်အခွန်ရုံးများ တွင် စည်းမျဉ်း ၅၂ အရ ဘောက်ချာ စာအုပ်များကို တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စားသုံးသူများထံမှ ရရှိသောအခွန်များအား လတလ၏ လဆန်း ၁၀ ရက်အတွင်း မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်များတွင် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်။
ပြေစာဖြတ်ပိုင်း (ဘောက်ချာ) သုံးလေ့မရှိသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကဲ့သို့ စားသောက်ဆိုင်များ အနေဖြင့် အခက်အခဲ များစွာရှိလာနိုင်ကြောင်း သာကေတ မြို့နယ်မှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပိုင်ရှင်တဦးကပြောသည်။
အခွန်ငွေပေးသွင်းမှုကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အခွန်ရုံးဝန်ထမ်းများက လိုက်လံစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး ကွမ်းယာဆိုင်၊ လက်သုတ်ဆိုင် စသောလုပ်ငန်းများ အတွက်လည်း ပါဝင်လာနိုင်သည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူ တဦးကပြောသည်။
Thursday, 20 August 2009 16:23 အောင်သက်ဝိုင်း
ရန်ကုန်မြို့တွင် လူတဦးလျှင် ငွေ ကျပ် သိန်း ၈၀ နီးပါးကုန်ကျသည့် လိင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု စနစ်သစ်တခုကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် ပေါင်လို (၀်) ဆေးရုံကြီး (Paolo Memorial Hospital) ၏ မြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စတင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမျိုးသားဘ၀မှ အမျိုးသမီးအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးဘ၀မှ အမျိုးသားအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း ခွဲစိတ်၍ လိင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှုစနစ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပေါင်လို(၀်) ဆေးရုံ ကြီး ရန်ကုန်ရုံးခွဲမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးကပြောသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်ပြောင်းလဲတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့နိုင်ငံခြား ဆေးရုံမရှိသေးဘူး။ ဒီက လိင် ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေကို ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ ပေါင်လို(၀်) ဆေးရုံကြီးမှာ ခွဲစိတ်ပေးမှာပါ။ တဦးကို သိန်း ၈၀ လောက်ကုန်မယ်”ဟု ပေါင်လို(၀်)ဆေးရုံကြီးရုံးခွဲ တာဝန်ရှိသူက ရှင်းပြသည်။
“လိင်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသားကနေ အမျိုးသမီးအဖြစ်ပြောင်းကြတာ များတယ်။ အမျိုးသမီးကနေ အမျိုးသားအဖြစ်ပြောင်းချင်ရင် အချိန် ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်လောက်ယူရတယ်။ ငွေကြေးအကုန်အကျက လည်း ပိုပြီးများတယ်။ သိန်း ၈၀ ဆိုတာက အမျိုးသားကနေ အမျိုးသမီး အဖြစ် လိင်ပြောင်းရာမှာ ကုန်ကျတဲ့ စရိတ်ပါ။ အမျိုးသမီးကနေ အမျိုးသားပြောင်း ရင်ဒီထက်ပိုပြီး ကုန်မယ်”ဟု ရန်ကုန်ရုံးခွဲ တာဝန်ရှိသူက ရှင်းပြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင် အမျိုးသားမှ အမျိုးသမီးအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း ၊ အမျိုး သမီး မှ အမျိုးသားအဖြစ်သို့လည်းကောင်း ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ယင်းနှင့်ဆက်စပ် သော ခွဲစိတ်မှု ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများသည် အမြတ်စွန်း ကြီးမားသောကြောင့် အပြိုင် အဆိုင် ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ ကြောင်း၊သို့သော်လည်း ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည့် အပြင် ရှေးရိုး အယူအဆ အစွဲအလမ်းကြီးသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုလိင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရန် ခက်ခဲလှကြောင်း၊ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက်လည်း လိင်ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိစေကာမူ ငွေကြေး တတ်နိုင်သူ နည်းကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ စာရေးဆရာတဦးက ပြောသည်။
“ဘာသာရေးအရလည်း လိင်ပြောင်းတာကို မြန်မာလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက် ပြီး စီးပွားရေးအရ ဒီမှာက စားဝတ်နေရေးအတွက်တောင် မနည်းရုန်းကန် နေရတာဆိုတော့ လိင်ပြောင်းဖို့ဆန္ဒရှိ ရင် တောင် ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေကြောင့် လုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး”ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ အထွေထွေရောဂါ ကု ဆရာဝန်တဦးကလည်း ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားတဦးကမူ အမျိုးသားဘ၀မှ အမျိုးသမီးဘ၀သို့ လိင်ပြောင်းလဲ ချင်ကြ သော လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားအများအပြား ပြည်တွင်းတွင်ရှိနေပြီး ငွေလည်းတတ်နိုင်ကြကြောင်း၊ လိင်ပြောင်းလဲရန် မည်သို့မည်ပုံ ပြည်ပဆေးရုံများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခွဲစိတ်မှုခံယူရမည်ကိုမသိရှိကြ သူက အများစုဖြစ်နေကြောင်း ပြောသည်။
ငွေကြေးတတ်နိုင်၍ ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းလဲသူများသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြင်ဆင် ပြုလုပ်ရန် ပြဿနာရှိ နိုင်သည်ဟု ရန်ကုန်စာရေးဆရာက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းလဲခြင်းကို တားမြစ်သော တရားဝင်ဥပေဒမရှိသော်လည်း လိင်ပြောင်းလဲ သူများသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ကို ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ လိင်ပြောင်းလဲပြီးနောက် နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကတ် ပြုပြင်လျှောက်ထားရာတွင် လိင်ပြောင်းလဲ သွားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ၏ စစ်ဆေးထောက်ခံချက် စာရွက်စာတမ်းများကိုပါ တပါတည်း တင်ပြလျှောက်ထားရမည် ဟု ရန်ကုန်တိုင်းလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“လိင်ပြောင်းလဲပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြင်ဆင်လျှောက်ထားမယ်ဆိုရင် လိင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ မှန်ကန်ကြောင်း ဆရာဝန်ထောက်ခံချက်တွေနဲ့လျှောက်ထားရင် ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို တကူးတက ခွဲစိတ် လိင်ပြောင်းလဲပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ပြင်ဆင်လျှောက်ထားတဲ့ အမှုတွဲမျိုး ဒီမှာမရှိသေးဘူး” ဟု ထိုအရာရှိက ဆိုသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်းက လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်ဈေးရောင်းသည့် အသက် ၂၁ နှစ် အရွယ် မသင်းစန္ဒာ ဆိုသော အမျိုးသမီးငယ်တဦးသည် ယောက်ျား အင်္ဂါ အလိုအလျောက် ထွက်ပေါ်လာသည့် အတွက် အမျိုးသမီးဘ၀မှ အမျိုးသားဘ၀သို့ ပြောင်းလဲသွားသည့် ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီး များ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက မောင်သန်းစိန် နာမည်ဖြင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ပြင်ဆင် ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်း ရပ်ကွက် မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Thursday, 20 August 2009 19:44 အေးလဲ့
ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အနုပညာပြပွဲကို မန္တလေးမြို့၌ သြဂုတ် ၂၁ ရက်နေ့တွင် စတင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူ များထဲတွင် ပါဝင်သူ ကဗျာဆရာ မင်းထက်မောင် ကပြောသည်။
ယင်းပွဲကို ဒီဇိုင်နာ စိုးဝင်းငြိမ်းက ဦးဆောင်စီစဉ်ပြီး မန္တလေးမြို့ရှိ မန်းမြန်မာ ပလာဇာ ပထမထပ်တွင် “Green Hearts Exhibition Art” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မနက်ဖြန်နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ပြသမည် ဖြစ်ကြောင်း ပွဲဖိတ်စာအရ သိရသည်။
လာမည့် ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၃ ရက်နေ့အထိ သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်မည့် ထို ပြပွဲတွင် မန္တလေးသား ကာတွန်း၊ ပန်းချီနှင့် ဓာတ်ပုံ အနုပညာရှင် ၇၅ ဦး ပါဝင်ပြသမည် ဖြစ်သည်။
ထို အနုပညာပြပွဲ၌ ကာတွန်း အော်ပီကျယ်၊ ဦးချစ်ငြိမ်း၊ ဦးထွန်းစိန်၊ ပန်းချီ ဦးခင်မောင်သန်း၊ ဦးခင်မောင်ချစ်၊ ပန်းချီ ကျော်မိုးသာ စသည့် အနုပညာရှင်တို့ ပါဝင်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယင်း ပြပွဲမှ ရရှိမည့် ရန်ပုံငွေကို နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ကျောင်းများ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သစ်ပင်၊ ပန်းပင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကဗျာဆရာ မင်းထက်မောင်က ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “ ဒီပွဲကို ရန်ကုန်မှာ ပြခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ပွဲကရတဲ့ ငွေတွေကိုတော့ ဖျာပုံ ဘက်က ကျောင်းမှာ အရိပ်ရ သစ်ပင်တွေ စိုက်ပျိုးပေးပါတယ်၊ အရိပ်ရ သစ်ပင်တွေကို ကျောင်းလေးကျောင်းမှာ စိုက်ပျိုးပြီးပါပြီ” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အနုပညာပြပွဲကို ယခုမန္တလေး အနုပညာရှင်များ၏ ဆန္ဒအရ ဆက်လက်ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ကာတွန်း အော်ပီကျယ်က ပြောသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါပြပွဲအတွက် ကာတွန်း အော်ပီကျယ်သည်လည်း မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
“ရန်ကုန်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက သဘောကျကြတယ်၊ အဲဒီလို အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်တော့ မန္တလေးက မိတ်ဆွေတွေကလည်း တပွဲလုပ်ဖို့ ပြောတာနဲ့ လုပ်ဖြစ်တာပါ” ဟု သူကဆိုသည်။
မန္တလေးတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိတရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အသုံးပြုမှု မတွေ့မြင်ရကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“အခု မန္တလေးမှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့နေ့စဉ်သုံးနေရတဲ့ ဒီ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် မသုံးဘူးဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုလိုချင်ချင်ကော ဥပဒေကြောင့်ကော ကျင့်သုံးနေတာ တွေ့ရတယ်” ဟု ကာတွန်းအော်ပီကျယ်က ပြောသည်။
Thursday, 20 August 2009 19:39 အေးလဲ့
ကာတွန်း ကံချွန်သည် ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် မန္တလေးမြို့နေအိမ်၌ အသည်း ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ ကြောင်း မိသားစုဝင် တဦးကပြောသည်။
၎င်း အသက် ၆၄ နှစ်ရှိ ကာတွန်းကံချွန်သည် အသည်း ကင်ဆာ ဝေဒနာကို လွန်ခဲ့သော မတ်လပိုင်းမှစ၍ ၆ လခန့်ခံစားခဲ့ရပြီး မန္တလေးမြို့ရှိ “နန်းတော်” အထူးကု ဆေးခန်းတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရကြောင်း သူ၏ သားမက်ဖြစ်သူက ပြောပြသည်။
ကာတွန်း ကံချွန် မှာ အဘ ဦးဘဌေးနှင့် အမိဒေါ်အေးရွှင် တို့မှ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ တွင် မွေးဖွား ခဲ့ပြီး ကာတွန်း ဗိုလ်မောင်၊ ဓာတ်ပုံ လှဝင်းစသည့် မွေးချင်းညီအစ်ကို သုံးဦးရှိသည်။
ကာတွန်း ကံချွန် က“လူငယ်တွေကို အချိန်ရှိတုန်းကြိုးစားကြပါ၊ အချိန်ရှိတုန်း ကိုယ် ဝါသနာ ပါရာကို ကြိုးစားကြပါ၊ အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့” ဟု မကွယ်လွန်ခင် ဧရာဝတီကို ပြောခဲ့ဖူးသည်။
သူ၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ရုပ်ကလာပ်ကို မနက်ဖြန် နေ့လယ် ၂ နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ရှိ ကြာနီကန် သုသာန်၌ မြေမြှပ် သဂြိုင်္ဟ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်က ပြောသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သမီးတဦးနှင့် မြေးသုံးဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်က ကာတွန်း ကံချွန်၏ တကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ယနေ့ ထိုပွဲပြီးဆုံးသည့် နေ့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကာတွန်း ကံချွန် တကိုယ်တော်ပြပွဲ ၂၀၀၉” ဟု အမည်ပေးထားသည့် ပန်းချီ ပြပွဲကို သူ၏ဆန္ဒအရ ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြပွဲ ခန်းမပိုင်ရှင် က အခမဲ့ခွင့်ပြုကြောင်း ကာတွန်းကံချွန်၏ တပည့်က ပြောခဲ့သည်။
သူရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသော စာအုပ်ပေါင်း ၇၃ အုပ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော် စာအုပ်များထဲတွင် ခေတ်ကျောင်းသား၊ ကြားဖူးနားဝ ပုံပြင်များ၊ မန္တလေးမြို့က လူတွေအကြောင်း၊ အပျိုစင်တို့ သိသင့်သမျှ (၁) (၂) ၊ အမျိုးသားတို့ သိဖို့ မိန်းမတို့ အကြောင်း၊ စီးပွားရေး ဟာသ စသည့် စာအုပ်များမှာ လူသိများသည်။
သူ၏ ဇာတ်ကောင်များ ဖြစ်ကြသော ဘ၊ ဘွားစွာ၊ ကိုပါရာနှင့် ကျော်မင်းဟန်တို့ကိုလည်း လူသိများသည်။
ကာတွန်း ကံချွန်သည် ကာတွန်း၊ သရုပ်ဖော်ပုံ၊ ပန်းချီ တို့ ရေးဆွဲခြင်း အပြင် ဝတ္တု၊ ဆောင်းပါး၊ သရော်စာ တို့ကို ရေးသားခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။
သူ၏ ပထမဆုံး ကာတွန်းမှာ ဟံသာဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခံခဲ့ရပြီး၊ ကြေးမုံ၊ ဗိုလ်တထောင်၊ လုပ်သား သတင်းစာများနှင့် ရှုထောင့် ဂျာနယ်၊ သတင်းဂျာနယ် တို့တွင် ကာတွန်းများ ရေးသားခဲ့သည်။ အလားတူ မိုးဝေ၊ ချယ်ရီ၊ ကလျာ၊ မဟေသီ စသည့်မဂ္ဂဇင်းများနှင့် မန္တလေးထုတ် ဂျာနယ်အများစုတွင်လည်း လက်ရှိ အချိန်အထိ ကာတွန်းများ ရေးသားနေဆဲဖြစ်သည်။
မန္တလေးဇာတိဖွား ကာတွန်းကံချွန်သည် ၁၉၆၃ - ၆၄ ခုနှစ်က မန္တလေး အနုပညာကျောင်းတွင် ပန်းချီ သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဆရာကြီး ဦးကံညွန့်၊ ဦးချစ်မြဲ၊ ဦးအေးကျော် တို့ထံတွင် သင်ယူခဲ့သည်။ “မိ၊ မော်၊ မေ၊ မ” ကာတွန်းများရေးဆွဲခဲ့သူ ကာတွန်းဝင်းမောင်သည် ကာတွန်းကံချွန်၏ ဆရာရင်းဖြစ်သည်။
Thursday, 20 August 2009 17:36 ရန်ပိုင်
စားအုန်းဆီ ၁၁ မျိုးကို စားသုံးရန် မသင့်ဟု ကြေညာချက် ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုအခါ ရန်ကုန်နှင့် တခြားမြို့ များတွင် ယင်းစားအုန်းဆီများသည် မှောင်ခိုပစ္စည်း တခုကဲ့သို့ ရောင်းဝယ် နေကြရကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံတို့မှ တင်သွင်းသည့်စားအုန်းဆီ ၁၁မျိုးသည် စားသုံးရန်မသင့်ဟု စစ်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဋ္ဌာနမှ တားမြစ်သော ကြေညာချက် ဇူလိုင်လ၂၅ရက် နေ့က ထွက်လာပြီးနောက် မှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်သွားပြီး စားသုံးရန် သင့်လျော်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော နှမ်းဆီ ၊ ပဲဆီများလည်း ဈေးတက်သွားကာ စားသုံးသူအများစု ၀ယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေကြာင်းသိရသည်။
“ထိုင်းပုစွန် ၂ ကောင် ဆီ ၁ လီတာ ဘူးတွေကို စားနေတာကြာပြီ၊ အရောင်လည်းလှအသုံးလည်းခံတယ်၊ အစိုးရရောင်း ပေးနေတဲ့ ကန်ဆီထက်စာရင် အများကြီး အရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ ပဲဆီ နှမ်းဆီကလည်းဈေးကြီးတော့ မစားနိုင်ဘူး၊ စား အုန်းဆီကိုပဲ မှောင်ခိုဝယ်စားနေရတယ်” ဟု ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှ စားသုံးသူတဦးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
တားမြစ်ထားသော စားအုန်းဆီများသည် ဈေးကွက်အတွင်းမှ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိဘဲ ကုန်သည်များ လက်ထဲ တွင်လည်း လှောင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများရှိနေသည့်အတွက် မှောင်ခိုပစ္စည်းကဲ့သို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ရောင်းချနေကြ ပြီး စားသုံးသူများအတွက်သာ ဈေးနှုန်းများ တက်လာကြောင်း သိရသည်။
“မှောင်ခိုထက်ဆိုးတယ်၊ မူးယစ်ဆေးရောင်းသလိုဖြစ်နေပြီ၊ဆိုင်ရှင်ကလည်း မျက်နှာသိမှပဲ ဆိုင်အောက်ကနေယူပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရောင်းပေး တယ်၊ဆီပုလင်းကို သတင်းစာစက္ကူနဲ့ တထပ်၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့သေချာထုတ်ပေးတယ်၊ ဈေးလည်းပိုတက်သွားတယ်” ဟု အဆိုပါစားသုံးသူကဆက်လက်ပြောသည်။
ပိတ်ပင်ထားသော ထိုင်းနိုင်ငံ မှ စားအုန်းဆီသည် အရောင်အသွေးကြည်လင်ပြီး အေးသောရာသီဥတုတွင်လည်း ခဲသွား ခြင်းမရှိဘဲ ဦးပိုင်လီမိတက်မှ ရပ်ကွက်များ နှင့် ဈေးများတွင် ကားဖြင့်လိုက်လံရောင်းချပေးသော စားအုန်းဆီသည်အ ရောင်မှာ ညိုညစ်ညစ်ဖြစ်ကာ အောက်ခြေတွင်လည်း လက်သုံးလုံးခန့်အနယ်များထိုင်နေသည်ဟု သိရသည်။
“ယိုးဒယားဆီက အရောင်လည်းကောင်းတယ်၊ မခဲဘူး၊ အစိုးရဆီကတော့ တရက်လောက်ကြာရင် ပုလင်းအောက်ခြေမှာ အဖြူရောင်အနည်တွေကျပြီ၊ အစိုးရကတားလည်း ယိုးဒယားဆီကတော့ ဆက် စားမှာပဲ၊ ၀ယ်ရတာ တော့ခက်သွားတာ ပေါ့” ဟု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ အိမ်ရှင်မတဦးကလည်းဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
တားမြစ်ဆီကိုတွေ့ရှိပါကထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် နှင့် ပစ္စည်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းမည်ဟုထုတ်ပြန်ထားပြီး၊ ဆိုင်ရှင်များက လည်းမရောင်းချ ပါဟု လက်မှတ်ထိုးထားရကြောင်း၊ စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းနှင့် ရဲများက ဈေးများထဲတွင် လှည့်လည် စောင့်ကြည့်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ပထမအကြိမ် စားအုန်းဆီများကို လိုက်လံသိမ်းဆည်းစဉ်က ဖမ်းဆီးမိသောဆီများကိုလည်းမည်ကဲ့သို့ ဖျက်ဆီးပစ်ကြောင်း ကို တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
“ဖမ်းထားတဲ့ဆီကို မီးရှို့တာလည်း မတွေ့ဘူး၊ ရေထဲသွန်တာလည်းမကြားဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ဗားကရာဆိပ်ကမ်းက ဦးပိုင်က ဆီကန်ထဲပဲသွန်ထည့်လိုက်လားတော့မသိဘူး၊ အစိုးရဦးပိုင်ကဆီကိုပိုရောင်းချင်လို့ ဒီလိုကြေညာတာဖြစ်တယ်” ဟု ဆီ လုပ်ငန်း ရှင်တဦး ကပြောသည်။
ယခုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့် စားအုန်းဆီများကို ကားများအောက်တွင် ဖုံးအုပ်ပြီး သယ်ယူတင်သွင်းနေရပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်ဟု စစ်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားသော ပဲဆီ ၊ နှမ်းဆီ မှာ တပိဿာ ၃၅၀၀ကျပ် ၊ စားအုန်း ဆီတပိဿာ ၂၆၀၀ကျပ် ရှိသည်ဟုသိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့ကကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန၏ အများပြည်သူစားသုံးရန်မသင့်ဟု စားအုန်းဆီများကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း မည်သို့မှ အစားထိုး ဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိဟု ဆီလုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရတားမြစ်ချက်မထုတ်ပြန်ခင်က ပဲဆီတပိဿာလျှင်၂၉၉၀ကျပ်၊ စားအုန်းဆီမှာ ၂၂၀၀ကျပ်ခန့်သာရှိသည်ဟု သိရသည်။
Thursday, 20 August 2009 16:21 ကိုထွေး
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ နိုင်ငံတကာလေဆိပ် Kuala Lumpur International Airport (KLIA) အနီးရှိ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၈၀ ခန့်သည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာ မင်းကြီးရုံးUNHCR ၏ အကူအညီဖြင့် အင်္ဂါနေ့က လွတ်မြောက်လာကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစခန်းမှ လွတ်မြောက်လာသူ ကိုရာမန်က “ကျနော်ကတော့ အင်္ဂါနေ့က လွတ်လာတာ၊ ကျနော်နဲ့ ၈၁ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က စာရွက်စာတမ်းကြောင့် ကျန်ခဲ့ရတယ်၊ မနေ့ကလည်း ၈၀ ထပ်ထုတ်လာတယ်၊ ကျနော်တို့ကို UNHCR က လာထုတ်တာ၊ ၂၄၀ လောက်လာထုတ်မယ်လို့ကြားတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
UNHCR ပြောခွင့်ရ ယန်တီ အစ္စမေးလ်(Yante Ismail) က လွန်ခဲ့သော ၂ရက်ခန့်က KLIA ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှ အထိန်းသိမ်းခံ လူ ၈၀ လွတ်မြောက်သွားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းစခန်းအတွင်း ကျခံနေသူတဦးက “အတိအကျတော့မသိဘူး၊ ၈၀ကျော်တာတော့ သေချာတယ်၊ နောက်ရက် လည်း လာထုတ်မယ်လို့ကြားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့လူကလည်းကျန်နေတယ်၊ ပြောသံ ကြားတာက ၂၀၀၉ ထဲမှာ အကုန်ထုတ်ပေးမယ်လို့ တော့ကြားတာပဲ” ဟုပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းကလည်း ယင်း စခန်းမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂၈ ဦး ထွက်ပြေးခဲ့ရာ ၂၂ ဦး လွတ်မြောက်သွားပြီး ၆ ဦးကို ပြန်လည် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း၊ အဆိုပါ ၆ဦးမှာ ယခုအခါတွင် မလေးရှား အာဏာပိုင်များက ရိုက်နှက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည့် အတွက် စိုးရိမ်မိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခင်က စခန်းတွင် စုစုပေါင်း မြန်မာ အလုပ်သမား ၇၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ဆန်းပိုင်းတွင် Kajang မြို့နယ်၊ Semenyih အရပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာန (လဝက) အချုပ်ခန်းမှ အာဏာပိုင် များက နေရာသစ် သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တနလာင်္နေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာတွင်လည်း မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများတွင် ဖမ်းဆီးခံထား ရသော နိုင်ငံခြားသား ၇၀၀၀ ခန့်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၈၀၀ ခန့် ပါဝင်နေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး မလေးရှားအစိုးရက RELA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လဝက အချုပ်ခန်းများကို ကွပ်ကဲရန်၊ တ ရားမဝင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများကို ဖမ်းဆီးရန် တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားကြောင်း သတင်းဖော် ပြချက်များ အရ သိရှိရသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ကြရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီကို စောင့်ဆိုင်းနေကြစဉ်။
ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကို နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေ ထိထိရောက်ရောက် ပေးနိုင်ရေးအတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့က ကယ်ဆယ်ရေး ရဟတ်ယာဉ် လုပ်ငန်းတွေကို စစ်အစိုးရက သက်တမ်း တိုးမပေးတော့တဲ့ အတွက် ရပ်တန့်လိုက်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် သက်တမ်း တိုးမပေးတယ်ဆိုတာကို စစ်တပ် အာဏာပိုင်တွေဖက်က အကျိုးအကြောင်း ရှင်းမပြခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလဆန်းပိုင်းကစလို့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒီ ဟယ်လီကော်ပတာ ကယ်ရေးလုပ်ငန်း သက်တမ်းဟာ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေဖက်က သက်တမ်း ထပ်တိုး မပေးတဲ့အတွက် ဟယ်လီကော်ပတာကို အသုံးပြု လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်း WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Chris Kaye က ဗီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
“အစိုးရက လုပ်ပိုင်ခွင့် သက်တမ်း တိုးမပေးတော့တဲ့အတွက် ရန်ကုန်နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအကြား ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပျံသန်းနေတဲ့ ဟယ်လီကော်ပတာ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်တန့်လိုက်ပါပြီ။ သူတို့က သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိပဲ လုပ်ငန်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာလေ။ ဒါကို သက်တမ်းတိုးပေးဖို့ ကျနော်တို့ဖက်က တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေဖက်က အဲဒီ တောင်းဆိုချက်ကို ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။”
ဒါပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေဖက်က အခုလို သက်တမ်းတိုးပေးဖို့ ဘာကြောင့် ငြင်းဆိုတယ်ဆိုတာ ရေရာတဲ့ အကြောင်းပြချက် မပေးခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“ဘာကြောင့် ငြင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ ကျနော်တို့ အတိအကျ မသိပါဘူး။ ကျနော်တို့ထင်တာတော့ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ အာဏာပိုင်တွေက လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားတယ်၊ အဲဒီလောက်ပဲ သူတို့ဖက်က ပေးချင်ပုံရတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျနော်တို့ဖက်ကလိုက်နာပြီး လုပ်ငန်းတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ယုံပဲ ရှိတာပါပဲ။ ”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွေ ခက်ခဲတာကြောင့် ဒီ ဟယ်လီကော်ပတာတွေက ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ပို့ဆောင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ထမ်းတွေကို ပို့ဆောင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် တိုက်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို WFP က ဟယ်လီကော်ပတာ ၁၀ စင်းနဲ့ စတင်ခဲ့တာမှာ ခုချိန်ထိ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ အပါအ၀င် အသက်ကယ် ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းပေါင်း မက်ထရစ် တန်ချိန် တထောင့် တရာကျော်ကို ဒီဟယ်လီကော်ပတာ တွေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဟယ်လီကော်ပတာတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို
ရပ်တန့်လိုက်တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းတွေ အတော်လေး ထိခိုက်မယ်လို့ Chris Kaye က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Save the Children ကလေးငယ်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Andrew Kirkwood လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသမှာ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးကာလ ကျော်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီ ဟယ်လီကော်ပတာအတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ ရံပုံငွေတွေကို တခြားနေရာတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံး ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နဲ့ ၃ ရက်နေ့အကြား တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်ကြောင့် အနည်းဆုံး လူပေါင်း တသိန်း လေးသောင်းလောက် သေဆုံးပြီး နှစ်သန်းခွဲလောက် အိုးအိမ်ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲ ရေကူးခိုးဝင်မှုနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရက အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ပေးခံခဲ့ပြီးမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခံခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်တော (John William Yettaw) ဟာ မနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံကို ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက် ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်နှင်ဒဏ်နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ထွက်လာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ် ၀က်ဘ် (Jim Webb) ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ဆေးရုံ တက်နေခဲ့ရာက မနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ ချီကာဂိုမြို့ လေဆိပ်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာယက်တောဟာ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ ၀က်ရူးပြန်ရောဂါကို ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေဆိပ်ကို ရောက်တော့ မစ္စတာယက်တောက သူလုပ်ဆောင်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောင်တ မရကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခြံထဲ သူရောက်သွားလို့သာ ဒေါ်စုဟာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခံရခြင်းကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ခုချိန်ထိ ယုံသေးကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်စုအသက်ကို ကယ်နိုင်ဖို့ ဒါမျိုး နောက်ထပ် အခေါက် ၁၀၀ လောက် လုပ်ဆိုလည်း လုပ်ဦးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ခုတော့ ဒေါ်စု အချုပ်ခံထားရတာကြောင့် သူ့အနေနဲ့ ကြေကွဲရကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ ယက်တောဟာ အငြိမ်းစား စစ်မှုထမ်း တယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတချို့ကလွဲလို့ အမေရိကန်မှာ လူသိအလွန်နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။
တာလီဘန်တို့က ရွေးကောက်ပွဲကို အနှောင့်အယှက်တွေ ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် ဈေးဆိုင်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပိတ်ထားရပြီး အစိုးရက လုံခြုံရေးတွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားပါတယ်။
အစောပိုင်းတုန်းက ထွက်လာတဲ့ သတင်းအရ တချို့နေရာတွေမှာ မဲပေးတဲ့သူ တော်တော်နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ်တွေကို သူပုန်တွေက ထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့် မဲပုံးတွေ မဖွင့်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ အာဖဂန် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ကဘူးလ်မြို့တော်မှာတော့ ဒီမနက်စောစောပိုင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတချု့ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တာလီဘန် သူပုန် ၂ ဦးကို အသေဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။
အာဖဂန်တောင်ပိုင်း ကန်ဒဟာမြို့မှာလည်း အမြောက်ပစ်ခံခဲ့ရပြီး အာဖဂန်နစ္စတန် မြောက်ပိုင်း Kunduz ညမြို့က မဲရုံတွေမှာလည်း ရော့ကက်နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံခဲ့ရပါတယ်။ အာဖဂန်မြောက်ပိုင်း Baghlan ပြည်နယ်မှာလည်း အာဖဂန်ရဲချုပ်တဦးကို တာလီဘန်တို့ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တ၀န်းက မဲရုံအများစုကတော့ ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကုလပြောခွင့်ရသူ Aleem Siddique က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ် တာလီဘန်အစိုးရ ပြိုလဲပြီးနောက် ဒါဟာ ဒုတိယအကြိမ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် ကာတွန်းဆရာကြီး ကံချွန် ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက မန္တလေးက နေအိမ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့မှာ ဆရာကြီးရဲ့ ပန်းချီပြပွဲကို သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ကစလို့ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ ပြပွဲနောက်ဆုံးရက် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန် နာရီပိုင်းမှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ဆရာဦးကံချွန်ဟာ အသက် ၆၄ နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လလောက်ကစလို့ အသည်း ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရတဲ့အကြောင်း ဆရာ့ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ မစိန်စိန်ဦးက ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့ ၃ နာရီခွဲပါရှင်။ ၃ နာရီလောက်အထိကို ဧည့်သည်လက်ခံပြီး စကားပြောတုန်းပါ။ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြမှ သူ သွေးနည်းနည်းအန်တော့ ဆရာဝန်ခေါ်၊ သွေးတိတ်ဆေးထိုး၊ ရေခဲအုပ် လုပ်ပေးသေးတယ်။ လုပ်ပေးရင်း ကျမတို့က ခေါင်းအုံး မြင့်တယ်ဆိုပြီး ခေါင်းအုံးနိမ့်တာလေး လဲပေးတဲ့အချိန်မှာပဲ ၃ နာရီခွဲတော့ ဆုံးသွားတာပါ။ ပြောမပြတတ်အောင် ၀မ်းနည်းပါတယ်။”
မန္တလေးမြို့က Oriental House ခန်းမမှာ ဆရာဦးကံချွန်ရဲ့ ပန်းချီပြပွဲကို ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး ဒီပြပွဲ နောက်ဆုံးရက် အိမ်ကိုပြန်ရောက် အပြီး နာရီပိုင်း အတွင်းမှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
“၁၅ ရက်နေ့က ပန်းချီပြပွဲ လုပ်တယ်လေ။ ပန်းချီကားတွေပါ၊ ကာတွန်းတော့ သိပ်မပါပါဘူး။ ပန်းချီကားတွေပဲ Oriental House မှာ ပြလိုက်တာ။ ဆေးကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေကို ဝေဒနာသက်သာအောင် ကုပေးနေတဲ့အတွက်၊ ဆရာဝန်ကြီးတွေလည်း ပျော်ရွှင်စေလိုတဲ့အတွက် ကယ်ရီကေးချားရေးပြီး ရယ်နေတဲ့ပုံတွေ၊ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ပျော်ပျော်နေတဲ့ ဘ၀ဟာ နေပျော်တဲ့ဘ၀ပါဆိုပြီး အဖေက ဆရာဝန်တွေကို ပေးတာပါ။ ဆရာဝန်တွေပုံကို ပြန်ရေးပေးတာ။”
ကာတွန်းဆရာ ဦးကံချွန်ရဲ့ သမီး မစိန်စိန်ဦး ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဦးကံချွန်ကို ထင်ရှား အောင်မြင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ကာတွန်းကားတွေကြောင့် ကာတွန်းဆရာ ကံချွန်ရယ်လို့ အများသိ၊ အများရင်းနှီးပေမယ့် ဆရာကြီးဟာ ၀ါရင့် ပန်းချီသမားတယောက်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကားမှာ နေထိုင်တဲ့ စွယ်စုံ အနုပညာရှင် ဆရာဦးဝင်းဖေက ပြောပါတယ်။
“ကာတွန်းကံချွန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း လေးငါးဆယ်ကတည်းက ကျနော် စသိတာ၊ ကျနော်တို့ မန္တလေးသားချင်း။ သူ့ရဲ့ခံယူချက်က သိပ်ရိုးတယ်။ သူက သူ့အတွက်၊ အများအတွက် ကောင်းကျိုး၊ အကျိုးရှိမယ့်ဟာကို အမြဲ လုပ်ချင်တဲ့လူ၊ အဲဒါကို အမြဲ ကြံစည်နေတဲ့လူ။ အသက်ကြီးလေ သူက အလုပ်လုပ်လေပဲ။ ဟောစရာရှိရင် ဟောမယ်၊ စာရေးစရာရှိရင် ရေးမယ်၊ ကာတွန်းရေးစရာရှိ ရေးမယ်၊ ပန်းချီရေးစရာရှိ ရေးမယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုး၊ သူ အများကြီး အလုပ်လုပ်တယ်ဗျ။ သိပ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူ၊ စံနမူနာ ထားထိုက်တဲ့လူတယောက် ဆုံးတာ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန် နစ်နာပါတယ်ဗျာ။”
ဆရာဦးဝင်းဖေ ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဦးကံချွန်ရဲ့ ဈာပနကို မနက်ဖြန်နေ့လယ် ၂ နာရီ နေအိမ်ကနေ မန္တလေး ကြာနီကန် သုဿာန်မှာ သဂြုင်္ိဟ်မယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံ တော်တော်များများက အစိုးရတွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်ပြီး ဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက် ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို တရုတ်နိုင်ငံက ဦးဆောင်ကူညီ ဖြေရှင်းပေးသင့်တယ်လို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ် ၀က်ဘ် (Jim Webb) က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ထပ်ပြီး ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်မှာ သွားရောက်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာဝက်ဘ်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ အခုလိုပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံကအပြန် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ၊ တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ ရှေ့ထွက်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ တရုတ်ဘက်က ဘာမှ လုပ်တာကို မတွေ့ရသေးပါဘူး။”
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တော်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မစ္စတာဝက်ဘ် ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက ဘန်ကောက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတုန်းကလည်း တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာအပေါ် သြဇာညောင်းမှုကို အသုံးချပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ် ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးသင့်တယ်လို့ သူက ပြောခဲ့တာပါ။ တဖက်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်နဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံတွေရဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် မြန်မာအပေါ် တရုတ်ရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တွန်းအားပေးရာရောက်ပြီး ဒေသတွင်း တရုတ်က တဖက်သတ် ခြယ်လှယ်နိုင်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာဝက်ဘ်က မြင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အာရှ ၅ နိုင်ငံကို ခရီးလှည့်လည်နေတဲ့ မစ္စတာဝက်ဘ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေက ဘယ်လောက် အရေးပါတယ် ဆိုတာကိုလည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော့်ခရီးစဉ်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အရှေ့တောင်အာရှဟာ အမေရိကန်အတွက် ဘယ်လောက် အရေးပါတယ် ဆိုတာနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေကြားမှာ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ဖို့ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေ အလေးအနက် သိရှိနားလည်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအတွက် ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ထပ်မံပြသဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။”
အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်း တရုတ်ရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ချိန်ခွင်လျှာ ညှိနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်အစိုးရ အနေနဲ့ သံတမန်ရေးအရ ပိုပြီးလုပ်သင့်တယ်လို့လည်း သူက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ တချိန်က ဗီယက်နမ်အပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု ဖယ်ရှားရေးကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးသူ ဆီးနိတ်အမတ် ၀က်ဘ်က အခုတော့ ဗီယက်နမ်ကို နမူနာယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ဖယ်ရှားပေးသင့်တယ် ဆိုတာကိုလည်း NPR သတင်းဌာနနဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အရေးယူမှုတွေ ဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက် ဗီယက်နမ်မှာ အကောင်းဘက်က တိုးတက်လာတဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ဖယ်ရှားပေးသင့်တယ် ဆိုတာကို အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ် ၀က်ဘ်က နှိုင်းယှဉ်ပြောသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နမ့်ခမ်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ကျောင်းသားများထံမှ အလွန်အကျွံငွေညစ်နေ
ကြာသပတေးနေ့၊ 20 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးသည် ကျောင်းရံပုံငွေ၊ ကျောင်းဝင်ကြေး၊ စာအုပ်ဘိုး စသည့်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးများအကြောင်းပြပြီး ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှစ၍ လစဉ်ကျောင်းသူ/ သားများထံမှ တဦးလျှင် အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၁သိန်းခန့် ကောက်ခံနေကြောင်း ဒေသခံသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုသည်။
ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့က ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်ဝင်းဝင်းရွှေသည် အရည်အသွေးစစ်တမ်းစာအုပ် (လစဉ်အကဲဖြတ် မှတ်တမ်းစာရွက်) မ၀ယ်မနေရ သတ်မှတ်ကာ ကျောင်းသူ/ သားတယောက်လျှင် ကျပ် ၅၀၀ နှုန်းဖြင့် အတင်းအဓမ္မ ၀ယ်ယူခိုင်းခဲ့သည် ဟု အမည်မဖော်လိုသူ န၀မတန်းကျောင်းသား တဦးကပြောသည်။
“ကျနော်တို့ တလကို အနည်းဆုံး ၄ ကြိမ်လောက်ပိုက်ဆံထည့်ရတယ်။ တခါကောက်ရင် ၃၀၀၀၀ ထက်မနည်းဘူး ထည့်ရတယ်” ဟုယင်းကျောင်းသားကပြောသည်။
သည့်အပြင် ဇွန် ၁၄ ရက်နေ့တွင် အတန်းပိုင်ဆရာ/ ဆရာမများအား ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား တစ်ယောက်မကျန် ဗလာစာအုပ် တစ်ဒါဇင်၂၄၀၀ ကျပ် ရောင်းချ ခိုင်းကာ ဇွန်လကုန် နောက်ဆုံး ထား၍ ငွေအပြီး ကောက်ခံ၍ ဆရာမကြီးထံ အပ်နှံရမည်ဟု ဆင့်ဆိုခဲ့ကြောင်း အလယ်တန်းပြ ဆရာမတဦးကပြောသည်။
“ငွေကောက်လို့မရတဲ့ အခန်းဆိုရင် အတန်းပိုင်ဆရာ/ ဆရာမကိုယ်တိုင်က အိတ်စိုက်ပေးရတယ်၊ မစိုက်နိုင်ရင် အပြစ်ပေးတယ်၊ နောက်ကျရင်လဲ အဆူခံရတယ်” ဟု ယင်းဆရာမကဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့က သတ္တမတန်းအတန်းပိုင်ဆရာမ ဒေါ်နန်းအေးရွှေမှသတ်မှတ်ထားသော ရက်ထက် တစ်ရက်နောက်ကျ ငွေသွင်းခဲ့သဖြင့် စာသင်ကြားခြင်းရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရသည်ဟု ကျောင်းဆရာတဦးကဆိုသည်။
“အဲဒီ ဇွန်လထဲမှာဘဲ ၀ါဆိုပန်းကပ်ဖို့ဆိုပြီး ကျောင်းသူ/ သား တဦးကို ၄၀၀ ကျပ်နှုန်းကောက်ခိုင်းတယ်။ အဲဒါလဲ မတတ် နိုင်တဲ့ ကျောင်းသူ/ သားတွေအတွက် ကျနော်တို့အတန်းပိုင်ဆရာ/ဆရာမများတွေဘဲ စိုက်ထည့်ပေးရတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာ/ဆရာမတွေကလဲ တယောက် တစ်ထောင် မထည့်မနေရဘဲ ထည့်ရတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။ ထိုလအတွင်းဝါဆိုပန်း ကပ်အလှူငွေအတွက် ကောက်ခံရရှိငွေ ကျပ် ၉၈၀၀၀၀ ကျပ်ရရှိသော်လည်း ၂၃၀၀၀၀သာအလှူလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူက ပြောသည်။
ဆရာမကြီးသည် နှစ်ဦးကျောင်းဖွင့်ချိန်၌ စစ်အစိုးရပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအားအခမဲ့ကျောင်း အပ်နှံခွင့်ရသည်ဟု ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ကျောင်းဝင်ကြေးအဖြစ် မူလတန်းအဆင့် ကျပ် ၃၉၀၀မှ ၄၅၀၀အထိ၊ အလယ်တန်းအဆင့် ကျပ် ၆၅၀၀မှ ၆၈၀၀ အထိနှင့် အထက်တန်းအဆင် ကျပ် ၇၄၀၀မှ၁၀၀၀၀အထိနှင့်လျှောက်လွှာဖိုး တရွက်လျှင် ၅၀၀ကျပ်၊ ဆရာ/မသုံး ပစည်း များအတွက် ကျပ်၅၀၀ ကောက်ခံခဲ့သည့်အပြင် ဆိုင်မှဗလာစာအုပ်များ တဒါဇင် ၁၉၀၀ကျပ်ဈေးဖြင့်မှာယူထားသည့်စာအုပ်များကို ကျောင်းသား/သူတဦးချင်းစီအား တစ်ဒါဇင် ၂၈၀၀ကျပ်နှုန်းမ၀ယ်မနေ ရပြန်လည်ရောင်းချခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
၎င်းအပြင် ကျောင်းအချိန်ပိုအတွက် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီမှ ကျပ်၃၀၀၀၀ ထပ်မံတောင်းဆိုသည်ဟုလည်း န၀မတန်း ကျောင်းသားအချို့၏ပြောပြချက်အရသိရသည်။
ကလေး/လူငယ်များ၏ပညာရေးကို ဦးစားမပေးဘဲ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှေ့တန်းတင်၍ပညာရေးဖြင့်စီးပွားရှာနေသော ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး၏ အပြုအမူကြောင့် ရပ်ဝေးမှ လာရောက်ပညာသင်ယူသော ကျောင်းသား/သူများ၊မိဘမဲ့ ကလေးများ၊ လက်လုပ် လက်စားကလေးများအဖို့ ငွေကြေးများ အချိန်မှီမပေးသွင်းနိုင်သည့် ဒုက္ခများကြုံတွေ့ရပြီး ကောင်းမွန်စွာစာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း အလယ်တန်းပြဆရာမတစ်ဦးကပြောသည်။
ယင်းကိစ္စအတွက် ဇူလိုင်လအတွင်း အဆိုပါစာအုပ်ဘိုးများမပေးသွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား ၅ ယောက်ခန့် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရသည် ဟုမူလတန်းပြဆရာမတဦးကဆိုသည်။ အဆိုပါအ.ထ.ကကျောင်းတွင် ကျောင်းသားဦးရေ ၂၃၀၀၀နှင့် ဆရာ/ဆရာမမဦးရေ ၆၀ ခန့်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ဗီဒီယိုရုံများနှင့် ညပိုင်းစားသောက်ဆိုင်များ ပိတ်ခိုင်းထား
သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက်၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်လာမည်စိုး၍ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ဘော့လုံးပွဲပြသည့် ဗီဒီယိုရုံများနှင့် ညပိုင်းဖွင့်သည့် စားသောက်ဆိုင်များကို ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များက တရားဝင် စာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲ ပိတ်ခိုင်းထားသည်။
“နုတ်မိန့်နဲ့ အမိန့်ထုတ်ထားတာ။ တရားဝင် စာထုတ်ပြန်တာတော့မရှိဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် အာဆင်နယ် နဲ့ အဲဗာတန်ပွဲပြီးတော့ တနာရီ(၁၅)ပွဲ မပြတော့ဘူး။ မေးကြည့်တော့ ဗီဒီယိုအစည်းရုံးက ခေါ်ပြီး ပိတ် ထားခိုင်းတာတဲ့။ ညအလင်းဆိုင်တွေလည်း ဒီလိုဘဲ ပိတ်ထားခိုင်းတယ်။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ဆော် စာကပ်တဲ့သူတွေနဲ့ အခုလို သွားလာတဲ့ သူတွေ ရောထွေးတာမဖြစ်အောင် ပိတ်တာလို့ အာဏာပိုင် တွေဆီက ပြန်ကြားရတယ်။” ဟု မြစ်ကြီးနားမြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစာများကပ်ခြင်း၊ နံရံတွင် မှုတ်ဆေးဖြင့် ရေးခြင်း စသည့် လှုပ်ရှားမှုများ မကြာခဏပေါ်ပေါက်နေပြီး ယခုအခါ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ နေရာအချို့၌ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ ရှိလာနေချိန်တွင် ယခုလို ပိတ်ပင်မှုများရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၄င်းကဆက်ပြောသည်။
“အရင်က နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ရုတ်ရုတ်ဖြစ်ရင် ဒီလိုဘဲ ပိတ်ခိုင်းနေတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ပြန်ဖွင့် နေ တာဘဲ။ ပိတ်လိုက်၊ ဖွင့်လိုက်ဘဲ။ အခုတခါ ပြန်ပိတ် ခိုင်းတာ။”
မြို့ပေါ်လုံခြုံရေး အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များ၊ မီးသတ်နှင့် ရဲများက ညပိုင်းတွင် ကင်း လှည့်မှုမျိုး လုပ်နေပြီး အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များ၌လည်း အာဏာပိုင်များက အရပ်ဝတ်ဖြင့် စောင့်ကြည့်မှုများ ရှိနေသည်။
ထိုင်းအလုပ်သမားနည်းတူ မြန်မာအလုပ်သမားများကို တန်းတူအခွင့် ရေးပေးမည်ဟု ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးပြော
Thu 20 Aug 2009, IMNA, ရိုင်မရော့
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို ထိုင်း အလုပ်သမားနည်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် အပြည့်ဝပေးမည်ဟု ထိုင်းအလုပ်သ မားဝန်ကြီးဌာနက ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက် သည်။
“ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကနေ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ထိုင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ တန်းတူအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် လိုက်တာဟာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် အခွင့်ရေးကောင်းပါပဲ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ် (FTUB) မှ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားရေးရာတာဝန်ခံ ဦးတင်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။
အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားကြားဖြစ်ပွားနေသည့် အလုပ်သမားတို့၏ပြဿ နာများကို မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေဖြင့် ထိုင်းအလုပ်သ မားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည့်အထောက်အထားတွေနှင့် သက် ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှာ လိုက်လံဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် လည်းရည်ရွယ်ထား ကြောင်း ၄င်းကဆက်ပြောသည်။
“အလုပ်သမားတွေအတွက် အခွင့်ကောင်းတွေဖြစ်မယ်လို့မြင်ပါတယ်၊ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးက ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ အလုပ်ရှင် တွေကလည်း လိုက်နာရမှာပဲ၊ တကယ်လို့ဖြစ်မလာရင်လည်း ကျနော် တို့အနေနဲ့ သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်း ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရမှာ ပဲ” ဟု ဦးတင်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံခြားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၆ သိန်း ၄ သောင်းဝန်းကျင်ကို ထိုင်းအလုပ်သမားနည်းတူ လုပ်အားခနှင့် လူမှုခိုလှုံရေး ခံစားခွင့်ပေးမည်ဟု အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှု ခိုလှုံရေးဌာနက ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းလည်း RFA သတင်းဌာနကကြေငြာထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တို့အနေဖြင့်လည်း ထိုင်းအလုပ် သမားဝန်ကြီးဌာန ၏ထုတ်ပြန်ချက်ကို သိရှိနိုင်ရန် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သ မားများနှင့် အလုပ်ရှင်များထံသို့ တဘက်တလမ်းမှ အသိပေးသွား မည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးက “သူတို့ထုတ်ပြန်တာက ထုတ်ပြန်တာပဲ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျနော်တို့လို အလုပ်သမားတွေနဲ့ ထိုင်းတွေလို အကျိုးခံစားခွင့်အတူ တူပေးမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် တန်တူအခွင့်အ ရေးရရှိရန် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို နှိမ့် ချနေသည့် ထိုင်းအလုပ်ရှင်တို့က အကျိုးတူခံစားခွင့်ပေးမည် မဟုတ် ကြောင်းလည်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ဟာတ်ယာမှ မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦးကလည်း “အခုဆိုရင် ထိုင်းအလုပ် သမားတွေက တနေ့ ဘတ် (၂၅၀) လောက်ရတဲ့လုပ်အားခဆိုရင် ကျ နော်တို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေက (၁၈၀) ဘတ်လောက်ပဲရကြ တယ်၊ တန်တူခံစားခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယခုလိုမျိုး တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို ထိုင်အလုပ်သမားနှင့် တန်တူအခွင့်ရေးပေးခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး၊ အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်ခံရလျင် ဥပဒေအရ အကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းအစိုးရက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦး ဂျပန်အကူအညီ ရယူရေးကြိုးပမ်း
မြန်မာစစ်အစိုးရ လယ်ယာနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးလည်းဖြစ် ၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးဟာ စစ်အစိုးရက ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ အပါအဝင် ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီတချို့ ရရှိရေး ဆွေးနွေးဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ကို ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၂ဝရက်မှာ ရောက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ဘယ်လိုဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိနိုင်သလဲ သိရအောင် ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရာမှာ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဌာနစိတ်မှူး မစ္စ အဲရီ ပြောတာက ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦး ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာကတော့ အခုအချိန်မှာ တရားဝင် မထုတ်ပြန်နိုင်သေးကြောင်း ၊ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူတွေ ပါဝင်နိုင်မဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မျိုး စစ်အစိုးရက လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ အမြဲလိုလားကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေ လုပ်သွားဖို့ ရှိကြောင်း တိုကျိုအခြေစိုက် မြန်မာ့ရေးရာရုံး တာဝန်ခံ ဒေါက်တာမင်းညိုက RFA ကို ပြောပါတယ် ၊
အခုလို ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ အောင်မြင်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိဘူးလို့ ဂျပန်ရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက သုံးသပ်ကြောင်း ဒေါက်တာမင်းညိုက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒေါက်တာမင်းညို။ ။ 'ဗမာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း သူတို့က ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ သူတို့ကို ထောက်ခံဖို့ လိုချင်တဲ့သဘော ရှိတာပေါ့လေ၊ ဂျပန်ကနေပြီးတော့။ ဒါပေမဲ့လည်း အခု စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဒို့လမ်းဒို့ပဲ သွားမယ်ဆိုတဲ့ အခု ၂ဝဝ၈ က္ဆွန်တော်တို့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ ဒီအတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အခု ဂျပန်က တောင်းဆိုနေတာက အဲ ပြောရင်တော့ ဒီ NLD ရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ပါဝင်နိုင်တဲ့ တခြား တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ပါဝင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မှသာလျှင် အသိအမှတ်ပြုနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိတယ်လေ။ ကုလသမဂ္ဂကလည်း ဒီသဘောမျိုး ရောက်လာတာ ဖြစ်တာကြောင့်မို့ သူတို့ အခုပေါ့လေ၊ USDA က သူတို့ ဘယ်လောက်လာလာ lobby လုပ်လုပ်၊ အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့တော့ က္ဆွန်တော်တော့ မထင်ဘူးလေ။'
ပြီးခဲ့တဲ့၂ဝဝ၃ခုနှစ် ဒီပဲယင်း တိုက်ခိုက်မှုကြီး ပြီးကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးအကူအညီတွေ ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ နောက်ပိုင်းမှာ လူသားချင်း စာနာတဲ့ အကူအညီတွေကို တိုက်ရိုက်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေက တဆင့်ဖြစ်ဖြစ် ပေးနေခဲ့ပါတယ် ၊ တလောတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရတရားရုံးက အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် မချမှတ်ခင် ရက်ပိုင်းအလိုမှာ ဂျပန်အစိုးရဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃သန်းခွဲ လောက်နဲ့ ညီမျှတဲ့ အကူအညီတခု ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၊ အဲဒီအကူအညီဟာ စစ်အစိုးရဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ အရာရှိတွေကို စီမံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အကူပြုသင်တန်းတွေ သင်ကြားပေးရေးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ် ။
ဇာဂနာနှင့် ကိုဇော်သက်ထွေးတို့ အယူခံကို တရားရုံးက ပယ်ချ
မြစ်ကြီးနားထောင်မှာ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ ဦးသူရခေါ် လူရွှင်တော် ဇာဂနာနဲ့ တောင်ကြီးထောင်မှာ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ အားကစားဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အယူခံတင်ထားတဲ့ အမှုကို ဗဟိုတရားရုံးချုပ်က သြဂုတ်လ ၁၉ရက် မနေ့က ပယ်ချလိုက်တယ်လို့ ရှေ့နေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ကိုဇာဂနာ၊ ကိုဇော်သက်ထွေး၊ ကိုတင်မောင်အေးနဲ့ ကိုသန့်ဇင်အောင်တို့ ၄ ဦးအတွက် အယူခံတင်တဲ့ အမှု ၈ မှုထဲက အာဏာပိုင်တွေ လက်ခံတဲ့ ၆ မှု ကို ဇွန်လ ၃ဝ ရက်နေ့က နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေ အပြန်အလှန် လျှောက်လဲခဲ့ကြပြီးနောက် မနေ့ကမှ တရားဝင် အကြောင်းပြန်ကြားစာ ထုတ်ပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အမှုတွဲထဲက ကိုတင်မောင်အေးရဲ့ အယူခံမှုကို ၃နှစ် လျှော့ပေါ့လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တဲ့ ၃ ဦးရဲ့အယူခံမှုကို ပလပ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကိုဇော်သက်ထွေးရဲ့ ဇနီး မခိုင်ချိုဇော်ဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
မခိုင်ချိုဇော်ဝင်းတင်။ ။ 'ရှေ့နေ ဦးဇော်လင်း ပြောတာကျတော့ အမိန့်ချလိုက်ပြီတဲ့၊ ကျန်တဲ့သူတွေ အကုန်လုံးကိုကျတော့ ကိုဇော်သက်ရော၊ ဦးသူရရော၊ သန့်ဇင်အောင်ရောက အရင်ရုံးကအတိုင်းပဲ အတည်တဲ့။ တင်မောင်အေးကိုကျတော့ မှတ်ပုံတင်အမှုမှာ သုံးနှစ် လျှော့ပေးတယ်တဲ့။'
ကိုဇာဂနာနဲ့ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့ ၄ ဦးပါ အမှုအတွက် ရှေ့နေ ဦးဇော်လင်းနဲ့ ဒေါ်ခင်ဌေွးွ့ကယ်တို့က လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့၎ဦး အတွက် ဒုတိယအကြိမ်အယူခံကို ဇွန်၃ ရက်နေ့က လျှောက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ်အယူခံကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ကိုဇာဂနာကို မူလချမှတ်ထားတဲ့ ထောင်ဒဏ် ၅၉နှစ်က ၃၅ နှစ်အထိ ၂၄ နှစ် လျှော့ချခဲ့ပြီး၊ ကိုဇော်သက်ထွေးကို မူလချမှတ်ထားတဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၉ နှစ်က ၁၁ နှစ်အထိ ၈နှစ် လျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုတင်မောင်အေးကတော့ ပထမအကြိမ်အယူခံစဉ်က မူလက ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂၉ နှစ်ကနေ၊ ၁၅ နှစ်ကို လျှော့ချခံခဲ့ရပြီး၊ အခု ဒုတိယအကြိမ် အယူခံရာမှာ ၃နှစ် ထပ်မံ လျှော့ခံရတဲ့အတွက် ထောင် ၁၁ နှစ် ကျခံရဖို့ ရှိပါတယ်။ ကိုဇာဂနာတို့အမှုအတွက် အထူးအယူခံ ထပ်မံ တင်မဲ့ကိစ္စကို စဉ်းစားတိုင်ပင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကိုဇာဂနာရဲ့ ခယ်မဖြစ်သူ မငြိမ်းက ပြောပါတယ်။
မငြိမ်း။ ။ 'အယူခံ ပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ သူတို့က နောက်ထပ် အထူးအယူခံဆိုတာ တခုရှိတယ်။ အဲဒါတော့ က္ဆွန်မတို့ နည်းနည်း စဉ်းစားဦးမယ်၊ ကိုသူရ ဆန္ဒလည်း မေးဦးမယ်။'
ကိုဇာဂနာနဲ့ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့ဟာ နာဂစ် လေမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး မလုံလောက်ကြောင်း သီတဂူဆရာတော် မိန့်ကြား
နာဂစ်လေမုန်တိုင်းသင့် ဒေသတွေက ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပက လက်ရှိ ကူညီမှုတွေဟာ လိုအပ်ချက်နဲ့ နှိုင်းစာရင် မပြောပလောက်တဲ့ အနေအထားမှာပဲရှိ သေးတယ်လို့ ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သီတဂူအဖွဲ့ရဲ့ အကြီးအကဲ ဆရာတော် အရှင် ဒေါက်တာ ဥာဏိဿရက RFA ကို မိန့်ကြားပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကို ၅ဝ ရာနှုန်းလောက်ပဲ တည်ဆောက် ပြီးစီးနိုင်သေးတယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
သီတဂူဆရာတော်။ ။ 'ဟာ ခြုံကြည့်ရင်တော့ ငါတို့ လုပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအရ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒို့ကတော့ ပြောနေကျ ဟို အညာသားပြော ပြောလိုက်ရင် ဆင်ပါးစပ် နှမ်းပက်သလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဘာမှ သိပ် ထိထိရောက်ရောက် မရှိဘူး။ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ပျက်တာ ဒို့ သိရတဲ့ စာရင်းအရဆို ကျောင်းပေါင်း ၅၄ဝ လောက် ပျက်စီးတယ်။ ဒို့အဖွဲ့က ဆောက်နေတာ ၂ဝ ကျော်ပဲ ရှိတယ်။ တခြားအဖွဲ့တွေလည်း ဒီလိုပဲ ၂ဝ၊ ၃ဝ၊ ၄-၅ဝ ပဲ ဆောက်နိုင်မှာပဲ။ အဲဒီတော့ ဒို့ ခန့်မှန်းတယ်။ ကျောင်းပေါင်း ၅ဝဝ၊ ၆ဝဝ လောက် ပျက်တဲ့အထဲ ပြန်ဆောက်နိုင်တာ တဝက်လောက်ပဲ ရှိမယ်လို့ ဒို့တော့ ဒီလိုပဲ ခန့်မှန်းတယ်။'
သီတဂူအဖွဲ့ဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပက အလှူရှင်တွေရဲ့ ကူညီထည့်ဝင်မှုနဲ့ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတာ အခုဆိုရင် ကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၈၅ဝဝ လောက် သုံးစွဲ ပြီးသွားပြီလို့ ဆရာတော် အရှင် ဥာဏိဿရက ပြောပါတယ်။
သီတဂူဆရာတော်။ ။ 'အကုန်လုံး ဗမာငွေ ဂဏန်းနဲ့ ပြောရင် ဒို့ အလှူဒါန အားလုံးဟာ ၈.၅ ဘီလျံ မြန်မာကျပ်ပေါ့။ အဲဒီလောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ပြည်သူဖက်က အလှူခံရလို့ လှူလိုက်တာတွေ။ အဲဒီတော့ ဂဏန်းလေးနဲ့ အဲဒီလောက် ခြုံပြောပြီးလို့ရှိရင် နည်းနည်းလေး detail လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရွာပေါင်း ၃,၅ဝဝ အထိ ဒို့ ရောက်တယ်။ ဆန်တွေ၊ အဝတ်အထည်တွေ၊ စားစရာတွေ၊ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ၊ စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ ခေါင်းအုံးတွေ၊ အဲဒါ ကားအစီးပေါင်း ၅ဝဝ ကျော်၊ ကွန်တိန်နာ အလုံးပေါင်း ၅ဝဝ ကျော် ပို့ခဲ့ပြီးပြီ။'
သီတဂူအဖွဲ့ဟာ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေက အလယ်တန်းကျောင်း ၂ ကျောင်း အပါအဝင် စာသင်ကျောင်း ၂ဝ တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပြီး၊ ကျပ်သိန်းတထောင် ကုန်ကျမဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတကျောင်းကို ဟိုင်းကြီးက္ဆွန်းမှာ တည်ဆောက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရက မိန့်ကြားပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆေးရုံ ၁၂ ရုံကို ပြုပြင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတွေ ဖြည့်တင်းခဲ့တဲ့အပြင် ဘိုကလေးနဲ့ ဖျာပုံမြို့နယ်တွေအတွင်း သောက်သုံးရေသန့် ရရှိရေးအတွက် ရေကန်ပေါင်း ၅ဝ ကို တူးဖော်မှု၊ ရေသန့်စက်တပ်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အလားတူ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါင်း ၂,၂၄ဝ အတွက် တကျောင်းကို သွပ်အချပ် ၁ဝဝ နဲ့ ငွေတသိန်းစီ အပြင် အထက်တန်းကျောင်း ငါးကျောင်းစာအတွက် တကျောင်းကို ကွန်ပျူတာ ဆယ်လုံးစီ တပ်ဆင်ပြီးစီးသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
ပြည်တွင်းကူညီရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လက်ရှိ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အရေးကြီးဆုံးအဖြစ် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုနေတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာတော် အရှင် ဥာဏိဿရက မိန့်ကြားပါတယ်။
သီတဂူဆရာတော်။ ။ 'လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်းတွေကို ကောင်းကောင်း ဖောက်ပေးဖို့ရယ်၊ ပြီးတော့တခါ လမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာ ရေကြောင်းက သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ခေတ်မီတဲ့ သင်္ဘောတွေ မော်တော်ဘုတ်တွေ ရှိနေဖို့ရယ်၊ အဲဒီဥစ္စာက နံပါတ်တစ် လိုမယ်။ အဲဒါ ရှိရင် ပုသိမ်က ဆန်ဟာ တောကြိုတောင်ကြားကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ရောက်သွားမယ်။ ပြီးတော့ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သိပ် ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့် ပုသိမ်က ဘိလပ်မြေ တအိတ်ဟာ ရန်ကုန်ကနေ ပုသိမ်၊ ပုသိမ်ကနေ အဲဒီ ပျက်စီးနေတဲ့ တံတားကနေ ကျောင်းတွေ ရှိတဲ့နေရာကို သယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့ ဘိလပ်မြေအိတ်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘိလပ်မြေ တအိတ်ကို ၅ဝဝ လောက်ဆိုရင် သယ်ယူပို့ဆောင်ခက ၂,ဝဝဝ လောက် ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် communication ကို အဓိကထား ဦးစားပေးပြီးတော့ လုပ်ဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ အဲဒီတချက် တွက်မိတယ်။'
နာဂစ်လေမုန်တိုင်းဘေးကြောင့် လူ ၁ သိန်း ၄ သောင်း နီးပါး သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ ဒေသခံ ၂ သန်း ၄ သိန်းလောက် အတိဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုအခါ ကုလသမဂ္ဂ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အာဆီယံတို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ TCG သုံးပွင့်ဆိုင် ဗဟိုအဖွဲ့က ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လာမဲ့ ၃နှစ်တာအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၉ဝ ကျော် အကူအညီ လိုအပ်နေကြောင်း TCG အဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
အမေရိကန်အမတ် ဂျင်မ် ဝက်ဘ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်များ
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mr. Jim Webb ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှု အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Mr. Webb ရဲ့ စကားကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချက်ချင်း ရုပ်သိမ်းလေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
Mr. Webb ရဲ့ ခရီးစဉ်အပေါ် သံတမန်ရေး ရှုထောင့်က သုံးသပ်ချက်နဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းနိုင်သလဲဆိုတာကို ဦးစိန်ကျော်လှိုင်က ဗန်ကောက်မြို့ကနေ သုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။
Mr. Yettaw ကို လွှတ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jim Webb ရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ်ကို မြောက်ကိုရီးယားက ဖမ်းပြီး အမေရိကန် သမတဟောင်း Bill Clinton နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့ တရုတ်-အမေရိကန်နဲ့ ကိုရီးယား-အမေရိကန် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
Mr. Jim Webb နဲ့ သမတဟောင်း Bill Clinton တို့ရဲ လုပ်ရပ်ကြောင့် အမေရိကန်ပေါ်လစီကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်လို့ အေပီသတင်းထောက် Lolita C. Baldor က ဝေဖန်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦးလုံးဟာ အဖမ်းခံရတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး ၂ ဦးကို ပြန်လွတ်အောင် လုပ်နိုင်တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်ကြောင့် ပြောင်းလဲမှုကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်တဲ့ သံတမန်တံခါးကို နှစ်ဦးလုံးက ဖွင့်လိုက်နိုင်သလို သမတ အိုဘားမားရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီတံခါးကိုလည်း ပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
Mr. Jim Webb နဲ့ သမတဟောင်း Bill Clinton တို့ရဲ ကယ်ဆယ်ရေး မစ်ရှင်တွေက တခုနဲ့တခု သိပ်ကပ်လွန်းတဲ့အတွက် မြန်မာလို တခြား သင်းကွဲနိုင်ငံတွေဘက်က ကြည့်ရင် အိုဘားမားအစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်တွေကို ဓားစာခံလုပ်တဲ့နည်းဟာ အမြတ်အစွန်းရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး ပရိယာယ်တရပ် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အထင်ရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်း အေပီသတင်းထောက် Lolita က ထောက်ပြပါတယ်။ ဒါပြင် အမေရိကန်တွေကို နယ်ရုပ်လို သုံးတဲ့နည်းနဲ့ တရားဝင်မှု ရနိုင်တယ်။ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ရနိုင်တယ်လို့ တခြားသင်းကွဲနိုင်ငံတွေ ထင်သွားနိုင်တယ်လုိ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဟောင်း John Bolton ကလည်း ပြောပါတယ်။
ခုလို Mr. Webb ရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ်မျိုးက စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို လေးစားမှုနဲ့ အသိအမှတ် ပြုသလိုဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို ဖိအားပေးဖို့ အမေရိကန်ကို အခက်တွေ့စေနိုင်တယ်လို့ က္ဆွမ်းကျင်သူတွေက စောဒကတက်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ Mr. Webb ကို လက်ခံတွေဆုံတဲ့အချက်ကြောင့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အထီးကျန်ဘဝက ရုန်းထွက်ဖို့ လမ်းရှာတာ သံမဏိချုပ်ကိုင်မှုကို လျှော့ပေါ့တာမျိုး ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပေမဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ဒဏ်ခတ်တာတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုတာတော့ စောလွန်းတယ်လို့ သြဇာကြီးမားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးရောက်မြို့ထုတ် New York Times သတင်းစာကြီးရဲ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကနေ အိုဘားမားအစိုးရကို သတိပေးထားပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သြဇာလွှမ်းနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်။ဆိုရင် အိုဘားမားအစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကြောင့် ဆိုင်းထားတဲ့ အမေရိကန်ပေါ်လစီ ပြန်သုံးသပ်ရေးကိစ္စကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်သင့်တယ်လို့ပါ New York Times သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာ အကြံပြုထားပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာ ဆက်ပြောတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် စီးပွားရေး ဖိအားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ထောက်ခံသူဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Mr. Jim Webb က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ တချိုံ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ မဆန့်ကျင်ပါဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။ အန်အယ်ဒီရှေ့နေက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ တမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အမြင်ကို က္ဆွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက် ကြားလိုပါတယ်လို့ ရေထားပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် New York Times သတင်းစာကြီးက ဘယ်လောက် အလေးထားသလဲ ပေါ်လွင်နေတယ်လို့ ဖတ်ရသူတွေက မှတ်ချက်ချပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်မှု ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိသလဲ ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်မှု အမျိုးအစားတွေ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ယာယီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Robert Wood က ပြောပါတယ်။ ဥပမာ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က ပြဌာန်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ဥပဒေ၊ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က ပြဌာန်းတဲ့ မြန်မာပြည်သူ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီ ဥပဒေ၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းများ ပို့ကုန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ တခြားဆက်စပ်တဲ့ ဥပဒေအပြင် လူမှောင်ခို ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ဥပဒေစတာတွေ အပါအဝင် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ်တဲ့ ဥပဒေတွေလည်းရှိတယ်လို့ Robert Wood က ပြောပါတယ်။
ဒါတင်မက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အမေရိကန်ဒဏိခတ်မှုတွေထဲမှာ မူးယစ်ဆေးကူးသန်းမှုဥပဒေ၊ နိုင်ငံခြား အထောက်အကူပြု ဥပဒေ၊ လက်နက်တင်ပို့မှု ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ၊ ယေဘုယျ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ပြန်သုံးသပ်ရေး ဥပဒေ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ် ဥပဒေစတဲ့ ဥပဒေတွေလည်း ပါတယ်လို့ USA Engage အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ခုလို များပြားလှတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေထဲက ဘယ်ဥပဒေမျိုးကို အမေရိကန်က ရုပ်သိမ်းသင့်တယ်လို့ Mr. Jim Webb က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့သလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ် အပေါ်မှာ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြည့်စုံနေပါပြီလို့ မေတ္တာရပ်ခံလာခဲ့လျင် ဒီပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို အမေရိကန်သမတက ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေထဲမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အဆုံးသတ်စေရေးအတွက် စစ်အစိုးရက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုံလုံလောက်လောက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးပြီး ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနဲ့ သဘောတူညီမှုတရပ် ရယူခြင်း၊ မြန်မာကို နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဆေးဝါး တန်ပြန်နှိမ်နင်းမှု သဘောတူညီချက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်နိုင်ငံစာရင်းက ပယ်ဖျက်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေ ပြည့်စုံရင် ဒီပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို အမေရိကန်သမတက ရုပ်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ကြောင်းပါ။
မန္ဈလေးမှ စာရေးဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာ ကံခ္ဆွန်ကွယ်လွန်
မန္ဈလေးမြို့က ထင်ရှားတဲ့ ကာတွန်း၊ ပန်းချီနဲ့ စာရေးဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာကံခ္ဆွန်ဟာ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက် နေ့လယ် ၃ နာရီခွဲမှာ ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
၅ ရက်ကြာ တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲအပြီး ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက် နေ့လယ်ခင်းက ဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့ သားမက်ဖြစ်သူက RFA ကို ပြောပြပါတယ်။
သားမက်။ ။ 'သူက ဟိုဟာလေ က္ဆွန်တော်တို့ ၁၅ရက်နေ့က ပြပွဲ one man show လုပ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ ၂ဝ ရက်နေ့ ဒီနေ့ ပြီးသွားတာပေါ့။ ၃ နာရီခွဲလောက်မှာ သူလည်း ဆုံးသွားတာပဲ။ အသည်းမှာ အနာရှိပြီးတော့ ကင်ဆာလို ဖြစ်တာပေါ့။'
ဆရာကံခ္ဆွန်ဟာ ၁၉၄၆ ဧပြီ ၄ ရက်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၆၆ ဟံသာဝတီသတင်းစာမှာ သတင်းစာ ကာတွန်းများစပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၆ မှာ ‘ခေတ်ကျောင်းသား’ လုံးချင်းဝတ္တုကို ရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ မှာ သမီးဖြစ်သူနဲ့အတူ စိန်စိန်ဦး စာအုပ်တိုက်ကို ထူထောင်ပြီး စာပေတွေကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ဟာသဆောင်းပါး၊ ကာတွန်းလုံးချင်းတွေနဲ့ နာမည်ကျော်သလို ပန်းချီကားတွေနဲ့လည်း နာမည်ရသူ ပညာရှင်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာကံခ္ဆွန် ဆုံးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီဖြစ်သူ ကာတွန်းဘိုမောင်က အခုလို မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
ကာတွန်းဘိုမောင်။ ။ 'က္ဆွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ အနုပညာ လုပ်ရပ်တွေကို ဆုံးရှုံးမှု အကြီးကြီး။ တကယ် လုပ်နိုင်တဲ့လူပဲ။ သားမက်ရှိတယ်၊ မြေးသုံးယောက်ရှိတယ်။'
ဆရာကံချွန်ရဲ့ ဈာပနကို မနက်ဖြန်နေ့လည် ၂ နာရီမှာ ပြုလုပ်မယ်လို မိသားစုက RFAကို ပြောပါတယ်။
ကူညီရေးရဟတ်ယာဉ် အသုံးပြုခွင့်ကို စစ်အစိုးရရပ်ဆိုင်း
နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့ နယ်တွေက ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရာမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကမႝာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) က ရဟတ်ယာဉ် သုံးစွဲတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က စပြီး ရပ်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒီရပ်တန့်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန် WFP တာဝန်ခံ Mr. Chris Kaye လည်း အတည်ပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာဌာန UN-OCHA မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ Mr. Thierry Delbreuve ကတော့ ဘာ့ကြောင့် တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်ခွင့် မရတာလဲ ဆိုတာတော့ အတိအကျ သူမသိသေးပါဘူးလို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကို ကျနော်မသိပါဘူး၊ ရန်ပုံငွေနည်းနေလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအဆင့် ကျော်သွားတယ်လို့ ယူဆလို့လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိသေးပါဘူးလို့ Mr. Delbreuve က ပြောသွားတာပါ။
ဆိုင်ကလုံးနာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ရဟတ်ယာဉ် ၁ဝ စီးပါတဲ့ လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကို ၂ဝဝ၈ မေလဆန်း နာဂစ်တိုက်အပြီး ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ စာရင်းတွေအရ ရဟတ်ယာဉ်အဖွဲ့က အစားအစာနဲ့ အမိုးအကာ ကူညီရေးပေးရေးအပါအဝင် မက်ထရစ် တန်ချိန် ၁၁ဝဝ ကျော်တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကို ဝေးလံတဲ့ နယ်တွေကို ပို့ဆောင် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Mr. Thierry Delbreuve က ဒီရဟတ်ယာဉ်အသုံးပြုမှု အရေးပါပုံကို အခုလိုပြောပါတယ်။
ဒီရဟတ်ယာဉ် ပို့ဆောင်ရေးဟာ မြစ်ဝက္ဆွန်းပေါ်ဒေသကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် သွားရောက်ရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ NGOs အဖွဲ့တွေအတွက် အလွန်အဖိုးတန်ပါတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းပြီးကာစဆိုရင် ဒီလိုသွားနိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးက အထူး တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ ဘိုကလေးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လပွတ္တာကိုပဲဖြစ်ြုဖစ် နာရီပိုင်းနဲ့ အချိန်တိုတိုအတွင်း သွားနိုင်ကြပါတယ်။ အခုတော့ ကုန်းတတန်၊ ရေတတန်နဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ရတဲ့ အနေအထား ပြန်ရောက်သွားပါတယ်လို့ ပြောသွားတာပါ။
အခုလို ရဟတ်ယာဉ်ပို့ဆောင်ရေး ရပ်တန့်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့အနေနဲ့ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ Mr. Delbreuve က ပြောကြားလိုက်ပြီး ဒီလောက်အထိ အသုံးပြုခွင့် ရခဲ့တာအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ နာဂတိုင်းရင်းသားအရေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံထဲက နာဂတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေဟာ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေ ကြတဲ့အတွက် သူတို့အရေးကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ အိန္ဒိယ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အိန္ဒိယ နာဂလန်းပြည်နယ် အကြီးအကဲ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး Mr. Neiphiu Rio က ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာမာမိုဟန်ဆင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အိန္ဒိယ ချင်း မြန်မာနိုင်ငံက နာဂလူမျိုးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ နစ်နာတာတွေကို ဦးဆောင်ကူညီပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဖက်က နာဂတွေဟာ အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေ မခံစားကြရကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကောလိပ်ကျောင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ သောက်ရေသန့်စနစ် မရှိကြကြောင်း၊ ရှေးကျောက်ခေတ်၊ သံခေတ်ကလို နေထိုင်နေကြရကြောင်း၊ ကျနော်တို့ ညီနောင်ဆွေမျိုးတွေရဲ့ ပြသနာတွေ အဆုံးသတ်စေဖို့ လိုလားပါကြောင်း Mr. Rio က ပြောပါတယ်။
လုမျိုးစု ၁၂ ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ နာဂတိုင်းရင်းသား ၆ သိန်းကျော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဖက်က ကျေးရွာပေါင်း ၂၅၄ ရွာမှာ နေထိုင်နေကြပါတယ်။ ဒီနယ်မြေဟာ အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့ နာဂလန်းပြည်နယ်ထက် ၃ ဆကျယ်တဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်လို့ အိန္ဒိယက လာတဲ့ သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးရေး တောင်းဆိုရန် အာဆီယံဆွေးနွေးဆဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၈ လ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အပြစ်ပေးထားတာကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင် မြန်မာစစ်အစိုးရကို တရားဝင် စာရေးတောင်းဆိုဖို့ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက် ညနေပိုင်းက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့မှာ အာဆီယံအရာရှိတွေဟာ ဒုတိယနေ့အဖြစ် ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာအပါအဝင် အာဆီယံ ၁ဝ နိုင်ငံက အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားဝင် ပေးစာသဖွယ် ရေးသားပြီး မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေဆီကို ပေးပို့မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူ Mr. Teuku Faizasyah က ပြောပါတယ်။
အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ စာရေးသားတောင်းဆိုဖို့ အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အခုထက်ထိ စာထဲမှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ် ရေးသားမယ် ဆိုတာတော့ မသေချာသေးကြောင်း ပြောကြားပါတယ်။
ဒီလို အာဆီယံပူးတွဲ စာရေးတောင်းဆိုတာမျိုးဟာ အာဆီယံသမိုင်းမှာ ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ Mr. Faizasyah က ဆိုပါတယ်။
စင်ကာပူ နိုင်ငံတကာရေးရာသိပ္ပံက အကြီးအကဲ Mr. Simon Tay ကတော့ ဒီလို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာဟာ အာဆီယံအနေနဲ့ ရှေ့တလှမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ လက္ခဏာပါလို့ ပြောပါတယ်။
အာဆီယံအနေနဲ့ မြန်မာကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်က ထုတ်ပယ်တာ၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေ လုပ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့၊ ဒီကိစ္စကို စာရေးတောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့် နောင်မှာ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုး လုပ်လာရင် မျက်နှာလွှဲထားတော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီကိစ္စမြန်မာဖက်က တုံ့ပြန်လာရင်လည်း သံတမန်ရေးအရ ဒီပြဿနာအပေါ် ဆောင်ရွက်ဖို့ လမ်းစပွင့်သွားနိုင်ကြောင်း မစ္စတာတေက သုံးသပ်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ သောကြာနေ့မှာ စာထုတ်ပြန်နိုင်ပြီး ဒီလုပ်ရပ်ကို အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့ အပြည့်အဝ ထောက်ခံတယ်လို့လည်း ပြောခွင့်ရသူ Mr. Faizasyah က ပြောပါတယ်
ရန်ကုန်မှာ သံဃာများကိုပါ စွမ်းအားရှင် ဖွဲ့စည်း
သံဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည်ကာလ နီးလာတာနဲ့အမျှ ရန်ကုန်မြို့တဝိုက်မှာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုတွေ တကျော့ပြန်ပြီး ဖြစ်မလာနိုင်အောင် ထိန်းချုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဘုန်းကြီးစွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တွေကို ရန်ကုန်တိုင်းက မြို့နယ် ၁ဝ မြို့နယ်မှာ ဖွဲစည်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သာသနာသန့်ရှင်းရေး ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီအဖွဲ့တွေကို သံဃာအများစုကတော့ ဘုန်းကြီးစွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တွေလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန် သံဃာတော် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့တွေကို မြို့နယ်အလိုက် သံဃာ့ မဟာနာယကအဖွဲ့တွေကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလကစတင်ပြီး ဖွဲ့စည်းနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်လာရင် ကြိုတင်တားဆီးဖို့နဲ့ အထက်အဆင့်ဆင့်ကို အကြောင်းကြားဖို့စတဲ့ အခုလက်ရှိ အရပ်သား စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တွေလို အသုံးပြုဖို့ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်တပါးက RFA ကို မိန့်ပါတယ်။
ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်။ ။ 'ကျောင်းတိုက်တွေကနေပြီးတော့ ဆယ့်လေးငါးပါးလောက်ကို ဘယ်သူက ဥက္ကဋ္ဌ ဘယ်သူက အတွင်းရေးမှူး ဆိုပြီး ရွေးလိုက်တယ်။ သံဃာထဲက ဆယ့်လေးငါးပါးလောက် ရသွားတော့ မယက အဖွဲ့ထဲက ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ ထဲကပါတယ်။ လဝကထဲက ပါတယ်။ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ ရယက ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ရာအိမ်မှူးများသည်လည်း သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးထဲမှာ အလိုလိုပဲ ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက အင်အားတောင့် သွားပြီ၊ သို့သော် သံဃာအများစုက သဘောမတူကြဘူး။ နာမည်ကတော့ သာသနာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အသုံးချတော့ ဘုန်းကြီးစွမ်းအားရှင်လို အသုံးချတယ်။'
ဆက်ပြီးတော့လည်း ဆရာတော်က အခုလောလောဆယ် ရန်ကုန်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ အဝင်အထွက်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းထိပ်တွေမှာ နယ်ထိန်းရဲ ၊ ရယက၊ စွမ်းအားရှင် စတာတွေနဲ့ အမြဲစောင့်ကြည့်နေကြပြီး သံဃာတော်တွေ ဘယ်ကွိွု့ကတယ်၊ ဘယ်က ပြန်လာတယ်စသဖြင့် မေးမြန်း စုံစမ်းတာတွေ လုပ်နေတယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။
တခြားကျောင်းတိုက်တခုက ဆရာတော်တပါးကတော့ သူတို့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ စစ်ဆင်ရေးတခု လုပ်တော့မဲ့ပုံစံတွေနဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေ လုပ်လာတာကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။
ဆရာတော်တပါး။ ။ 'အော်ပရေးရှင်းတခုအတွက်လို ရည်ရွယ်ပြီး အဆင်သင့်ပြင်ထားတာတွေတော့ ရှိပါတယ်ဒကာကြီး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ သာသနာ့နယ်မြေလို့ ပြောလို့ရတာပေါ့။ သာသနာ့နယ်မြေကို သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတွေ သွားတယ်၊ လာတယ်၊ ဝင်တယ်၊ ထွက်တယ်ဆိုတာ ဘာများ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရှိလို့လဲ။ ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ကတုံးနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဆို သူတို့မှာ ရန်သူကြီးလိုပဲ သူတို့မှာမြင်ပုံ ရတယ် ဦးဇင်းတို့မှာ အဲလိုပဲ ခံစားရတယ်။'
ရန်ကုန်က ဆရာတော်တွေ မိန့်ကြားခဲ့တာပါ။ အဲဒါတွေအပြင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အလှူအတန်း လာလုပ်တဲ့ ဒကာဒကာမတွေကိုလည်း ဘယ်ကလည်း ဘာအတွက် လာလှူရတာလည်းစသဖြင့် လိုက်ပြီး မေးမြန်းနေတာကြောင့် အလှူအတန်း ဒါနလုပ်ကြတာကို အဟန့်အတား လုပ်နေသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ မိန့်ကြားကြပါတယ်။
မိမိလုပ်ရပ်အတွက် ဂ္ဆွန်ယက်တော ဝမ်းမနည်း၊ အကြိမ်တရာ ထပ်လုပ်ဦးမည်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ဝင်းထဲကို ရေကူး ဝင်ရောက်ခဲ့လို့ ပြဿနာတွေ ရှုပ်ထွေးစေခဲ့တဲ့ အမေရိကန် လူမျိုး ဂ္ဆွန်ယက်တောက သူလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် နောင်တ မရကြောင်း၊ အခွင့်သင့်ရင် အကြိမ်တရာ ထပ်လုပ်ဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် စီရင်ခံရပြီး အထက်လွှတ်တော် အမတ်တဦးရဲ့ ကြားဝင် မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြောင့် လွတ်မြောက်လာတဲ့ မစ္စတာ ယက်တောဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ကတဆင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ချီကာဂိုမြို့ လေဆိပ်ကို ဆိုက်ရောက်လာရာမှာ အေပီ သတင်းထောက်တဦးရဲ့ အမေးကို ခုလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
သူ့ရဲ့ နေရင်း မစ်ဇိုရီပြည်နယ် စပရင်းဖီးလ်မြို့ကို လေယာဉ် မထွက်မီ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ နောက်ထပ် အကြိမ်တရာ ထပ်ပြီး ကြိုးစားမှာပဲလို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
မြန်မာဒုက္ခသည်များအရေး နိုင်ငံတကာ အရေးတယူ စဉ်းစားသင့်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အိုးမဲ့အ်ိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေဟာ အတိုင်းအတာ တခုအထိ နိုင်ငံတကာက ပါဝင် အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာပြီလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဦးရေနဲ့ ဒုက္ခသည်များ ရွှေ့ပြောင်းရေး ဆိုင်ရာ၊ လက်ထောက် ဒုတိယ ဝန်ကြီး အဲရစ်-ရွှားတ်စ် က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် မနေ့က ကျရောက်တဲ့ ကမႝာ့ လူသားချင်း စာနာမှုနေ့ အခမ်းအနားကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြိးဌာနမှာ မနေ့က ညနေပိုင်းက ကျင်းပ ရာမှာ မစ္စတာ ရွှားတ်စ် က ကမႝာအရပ်ရပ်ရှိ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောကြားရင်း မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေကို ထည့်သွင်းပြောသွားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်တွေ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း နယ်မြေတွေမှာ တပ်မတော် စစ်ဆင်ရေးတွေ တိုးများလာတာကြောင့် လူပေါင်း တသောင်းကျော်လောက်အထိ အိုးပစ် အိမ်ပစ် ရှောင်ပုန်းထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ သတင်းတွေ ကြားရပြီး အင်မတန်ကို စိုးရိမ်သောက ဖြစ်ရကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လအတွင်းကလည်း ကရင်ပြည်နယ် မှာ အစိုးရက စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့လို့ အရပ်သားတွေ ၅ဝဝဝ ကျော် အိုးအိမ်စွန့်ပစ်ပြီး တောတောင်တွေထဲမှာ ရှောင်ပြေးနေခဲ့ကြရကြောင်း၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ထောက် ဒုတိယ ဝန်ကြီး ရွှားတ်စ်က ပြောသွားတာပါ။
ဒါအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာ ခိုကိုးရာမဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ကြားခဲ့ရကြောင်း၊ ကုသိုလ်ဆိုးကြရှာတဲ့ အဲဒီ ဒုက္ခသည်တွေကို အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးနေကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ် တလျှောက်မှာ ရှိကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်ပေါင်း တသိန်းခွဲလောက်ကိုလည်း အထောက်အပံ့တွေ ပေးနေကြောင်း မစ္စတာ အဲရစ်-ရွှားတ်စ် က ပြောကြားသွားပါတယ်။
၂၀ သြဂုတ် ၂၀၀၉
မိုးဦးလေဦး မိုးသံလေသံတွေကြားမှာ ဖားအော်သံတွေ ကြားတတ်ရတာ မဆန်းပါ။ သဘာဝပေပဲကိုး။ အခု မိုးလယ်မိုးနှောင်း ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖားအော်သံတွေ ညံစီစီ ကြားနေရတော့ ဆန်းလှသည်။ ယခု ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လမှာ နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာကြီးတွေမှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို ဖားအော်သံတွေကို တွေ့မြင်ကြားနေရသည်။ ငပြူးက ငပြဲလုပ်။ ငပြဲက ငပြူး လုပ်နေကြတဲ့ ဖားဆောင်းပါးတွေပါ။ ဖားတွေက ရိုးရိုးပဂုံညင်းဖားတွေတော့မဟုတ်။ ကပ်ဖား၊ ရပ်ဖား၊ စားဖားတွေ ဖြစ်သည်။
နအဖ ကျွန်ယုံတော် သစ္စာစောင့် ငယ်မွေးခြံပေါက်တွေရဲ့ မစားရ၀ခမန်း ရွှေနားတော်သွင်း ဧချင်းများဖြစ်သည်။ ကလောင်နာမည်သာလွဲတယ်။ စကားလုံးအကြောင်းအရာတွေက ဆီသယ်မလက်နှီးစုတ်၊ တခါလာလည်း မဲပြာပုဆိုး၊ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်တဲ့လိပ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖော် မသူတော်ဆိုတာလို ငါ့စကားနွားရ ရေးထားတဲ့ သံတူကြောင်းမကွဲ ဆောင်းပါးတွေ။ ဖတ်ရတာ အော့နှလုံးနာစရာ။ အောက်တန်းကျလိုက်တာကလည်း လွန်ရော။ သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေ သိချင်လို့သာ အောင့်အည်းသီးခံပြီး ဖတ်ကြည့်ရတာပါ။
မောင်မှတ်၊ ကျော်ရဲမင်း၊ လေ့လာသူတဦး၊ မိခင်သန့်၊ ကိုမြန်မာ၊ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၊ လူသစ်၊ ကိုသာယာ၊ မောင်ဒဲ့ဒိုး၊ ဦးမျိုးမြင့် (ဥပဒေ)၊ ကိုကိုညီညီ၊ စိုးမြကျော်၊ မောင်ပွင့်လင်း၊ ဗညားအောင်၊ တောသားလေး၊ မန်းသာစိန် (ဖာပွန်) စတဲ့ တွင်းတူးပြီး မိုက်နေကြတဲ့ ဓားမနောက်ပိတ်တွေလို့ ဆိုရမလားပဲ။
တယောက်လာလည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဆန္ဒခံယူပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတပါတယ်။ (၉၂.၄၈) ရာခိုင်နှုန်း ပြည်သူက တခဲနက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲပေးလို့ အတည်ပြုပြီး ရေးလိုရေး။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဆန္ဒ ပြည်သူ့အဆုံးအဖြတ်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများက လိုက်နာရမှာပါ။ ဒါမှ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့ ညီညွတ်မှာပါ။ အများဆန္ဒကို အနည်းစုက လိုက်နာရမှာက ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အလေးထားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောလိုပြောနဲ့။ ပြီးတော့ ရှိသေး။ တရားဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တာပါ။ တရားဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူးတဲ့။ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲ တရားဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ Force Labour, Child Soldiers မရှိဘူးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာမရှိဘူး ရေးလိုရေး။ အံ့ရော၊ အံ့ရော။ ဆင်သေကို ဆိတ်ရေဖုံးတဲ့ ဟာသပြက်လုံးတွေ။ ကဲ ကြည့်ကြရအောင်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းဟာ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူထောက်ခံမှုအဆင့်သာ ရှိပါသေးတယ်၊ အတည်မပြုရသေးပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲပြီး လွှတ်တော်ခေါ်ယူကျင်းပမယ့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်မှ အတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ပြည်သူတွေကို ယုံထင်ကြောင်ထင် အတည်ပြုပြီး လိမ်ဆင်တွေလုပ်ရေး ရှက်စရာပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ သေဆုံးခဲ့ကြတဲ့လူ (၁) သိန်းကျော်ရဲ့ ဆန္ဒမဲတွေ၊ အိုးပျက်အိမ်ပျက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတဲ့ လူ(၃) သိန်းကျော်ရဲ့ဆန္ဒမဲတွေ ဘယ်လို ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ကြသလဲ၊ စဉ်းစားစရာ။ ၀န်ထမ်းများနဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမားတွေဟာ ရုံးတွေမှာ၊ စက်ရုံတွေမှာ မဲထည့်ကြရတာ လွတ်လပ်မှုရှိကြရဲ့လား။ ရပ်ကွက်မဲရုံတွေမှာ နအဖအလိုတော်ရိ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်၊ မီးသတ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တွေနဲ့ ထင်တိုင်းကြဲနေတာ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု ရှိကြရဲ့လား။ ဒါက (၉၂.၄၈) ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု မရှိဘူးဆိုတာကို ထောက်ပြတာပါ။ အများစုရဲ့ဆန္ဒကို အနည်းစုက လိုက်နာရတာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်ပါတဲ့။ ကဲ…၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအများစုရဲ့ ဆန္ဒကိုကော ခင်ဗျားတို့တတွေ လိုက်နာခဲ့ကြရဲ့လား။ ကိုယ့်မျက်ချေးလည်း ကိုယ်မြင်တတ်ပါဦး။ လိပ်လိုတော့ ကိုယ့်ဘက်ကို ကိုယ်မယက်ကြပါနဲ့၊ မျှမျှတတစဉ်းစားကြပါဦးနော်။
နောက် မြန်မာနိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အလေးထား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ရေးထားတယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကစပြီး ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှ နှစ်စဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာတွေ ဘာတခုများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ၊ ဖြေပါ။
နောက်တခုရှိသေးတယ်။ တရားဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး၊ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ဥပဒေပညာရှင်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်က ရေးထားသေးတယ်။ ကဲ…ဥပဒေနဲ့အညီ ဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်။ ဥပမာပေါ့ဗျာ။ တူညီသောပုဒ်မတခုမှာ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့ သာမန်အရပ်သားတဦး ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ရင် အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်မှာ အမြင့်မားဆုံး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတတ်ပြီး သာမန်အရပ်သားမှာ ငွေဒဏ် (သို့) အသေးဆုံးပြစ်ဒဏ်မျိုးသာ ပေးခံရတတ်ပါတယ်။ နောက် သာမန်အရပ်သားတဦးနှင့် ကြံ့ဖွံ့ /စွမ်းအားရှင်လိုလူမျိုးတွေနဲ့ တူညီသော ပုဒ်မတခုခုကို ကျူးလွန်တာချင်းအတူတူ သာမန်လူက ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေပြီး ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်များမှာ လွတ်မြောက်ရသည်။ အရှင်းဆုံးပြောရလျှင် ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင် လူရိုက်၊ လူသတ် ဘာမှမဖြစ်။ ဥပမာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းမှာ အန်အယ်လ်ဒီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လုပ်ကြံခံရ (ကံကောင်းလို့ မသေခဲ့တာပါ) တာမျိုးကိုကြည့်ရင် အရိုက်ခံရသူနှစ်ဦးမှာ အကျယ်ချုပ် အထိန်းသိမ်းခံရပြီး ဥပဒေကျူးလွန်သူ လူသတ်သမား/အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်များ ဘာမှမဖြစ်။ နောက် မတ္တရာမြို့နယ် (မန္တလေးတိုင်း) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းလွင်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များမှာ အရိုက်လည်းခံရ၊ ပြစ်ဒဏ်လည်းအကျခံရ၊ ကျူးလွန်သူ လူရမ်းကား ကြံ့ဖွံ့ /စွမ်းအားရှင် ဘာမှမဖြစ်။ ၁၉၉၆-၉၇ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထောင့် အနီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကားကို လုံခြုံရေးတွေ အစောင့်ချထားသည့်ကြားက မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် ဥပဒေမဲ့ ၀င်ရိုက် သောင်းကျန်းမှု ဖြစ်စဉ်မှာကော ရဲတွေရှိရက်နှင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်း မရှိခဲ့တာတွေဟာ တရားဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်ချုပ် ဆောင်ရွက်နေတာဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား၊ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
အဆိုးဝါးဆုံးနဲ့ တနိုင်ငံလုံးသိနေကြတဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း စိမ်းလဲ့ကန်သာအနီး ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု မကြာမီ ဖော်ထုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီ ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ခုထိ ကြားယောင်မိနေပါသေးတယ်။ အခု အဲဒီအမှု ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ ဘယ်လဲ…ဘာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ဥပဒေဆိုတာ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘူးဆိုတာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလား၊ သံသယ၀င်စရာတွေပါ၊ မယုံနိုင်စရာပါ။
တရားဥပဒေမဲ့ ပြုလုပ်နေတာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များမှာ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်တွေရဲ့ မတရားအကြမ်းဖက်မှုတွေ ကျန်ပါသေးတယ်။
နအဖက ကြံ့ဖွံ့မွေး၊ ကြံ့ဖွံ့က စွမ်းအားရှင်မွေး၊ ထမင်းကျွေး၊ နေ့တွက် နှစ်ထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး လူစုလူဝေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုဖြစ်ကြတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ၈၈ ကျောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ၀ိုင်းရိုက်ဝိုင်းဖမ်း သတင်းပို့ လုပ်ဆောင်နေတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၆၃) နှစ် မွေးနေ့အတွက် အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပနေကျဖြစ်တဲ့ မွေးနေ့ပွဲမှာ သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များ ဆွမ်းလောင်း၊ သက်စေ့ငှက်တွေလွှတ်၊ မိုးပျံပူဖောင်းတွေလွှတ် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ မေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေကြတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲကို ကြံ့ဖွံ့ က မွေးထားတဲ့ အမူးသမား စွမ်းအားရှင်တွေက ၀င်ရောက်ပြီး ဆူပူအော်ဟစ်ကြ တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကြိုတင်ကြံရွယ်ထားတဲ့ ဒိုင်နာကား (၅) စီးနဲ့ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်အပြည့် လူအုပ်ကြီးဟာ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်ပြီး အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ နောက်တရားရုံးတင်တယ်၊ ထောင် (၂) နှစ်ခွဲစီ ပြစ်ဒဏ်ချတယ်။ ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ ထောင်တွေဆီပို့တယ်။ ဘယ်မလဲဥပဒေ၊ ဘယ်မလဲ တရားမျှတမှု။ ဒါဟာ နအဖမွေးထားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်တွေက ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်နေတာ။
၃၁-၇-၀၉ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးတင်တရားစွဲဆိုထားရာမှ စီရင်ချက်ချမည့်နေ့တွင် မြင်းခြံ တောင်သာမြို့နယ် တို့မှ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များက မြင်းခြံမြို့ရှိ အလိုဆန္ဒပြည့်ဘုရားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်များ တုတ်များကိုယ်စီကိုင်ဆောင်ပြီး နှောင့်ယှက်ဖို့ လာကြတယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားသိကြတဲ့ ပြည်သူများက မနေနိုင်ကြဘဲ အဲဒီ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်တွေကို ပြန်ဝိုင်းကြတယ်။ နောက်ဆုံး ကြံ့ဖွံ့/ စွမ်းအားရှင်တွေက သူတို့မှားကြောင်း တောင်းပန်ပြီး ထွက်ခွာသွားကြတယ်။ တကယ်တော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့လူတွေကို ငွေနှစ်ထောင်၊ သုံးထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်လာ၊ ဒီကျတော့ လူရိုက်ခိုင်းတာပဲ။ ဒါဟာ အဓိက မင်းမဲ့စရိုက်ကို ကျူးလွန်တာ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူကခိုင်းတာလဲ အရှင်းကြီးပါ။ တချို့ ကြံ့ဖွံ့တွေကလည်း သိကုန်ကြလို့ ထွက်ကုန်ကြပါပြီ။
နအဖအစိုးရရဲ့ သတင်းစာထဲက စာလုံးမဲကြီးနှင့်ရေးထားတဲ့ “ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု ဖန်တီးသူများ ၀ိုင်းဝန်းဖယ်ရှား” ပါဟုဆိုလျှင် အစွယ်လိုသူ မိဖုရား၊ အသွားစေခိုင်းသူ မင်းဧကရာဇ် ကဗျာထဲကလို အားလုံးကို ဖယ်ရှားသုတ်သင်ပစ်ရပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Force Labour, နှင့် Child Soldiers မရှိပါဘူးလို့ ဖားဆောင်းပါးရှင်တွေက ဘယ်လိုပဲ ကာကွယ်ပြီး ရေးနေကြပေမယ့် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့မှ မစ္စတာပီညဲရိုး၊ ကင်တာနားတို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်စုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာတွေက သက်သေအထင်အရှား ပြနေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် အကြံပေးလက်ထောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကအစ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အီးယူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၊ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ တာဝန်ယူထားသူများက ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုနေရခြင်း စသည့် နိုင်ငံပေါင်းစုံနှင့်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကကော၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကပါ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို အရေးတယူ ထဲထဲဝင်ဝင် ပြစ်တင်ရှုတ်ချ၊ ပိတ်ဆို့တားဆီး စစ်ဆေးစုံစမ်းညှိနှိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်နေရခြင်းမှာ ယနေ့ နအဖအစိုးရ လက်ထက်တွင်သာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်မှာ ရှက်ဖွယ်ပေ။
တကမ္ဘာလုံးနဲ့တယောက် ယခုကဲ့သို့ ၀ိုင်းဝန်းရှုတ်ချပြစ်တင် ပိတ်ဆို့တားဆီးခံရပြီး ဟိုနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေလာလိုက် မျက်နှာချိုသွေးရ၊ ဟိုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်လာလိုက် မျက်နှာချိုသွေးရ။ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်၊ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေက ရှက်လှပါပြီ။
ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စ၊ ကိုယ့်အချင်းချင်း ရှင်းလင်းရမည့်ကိစ္စ၊ အဖြေရှာရမည့်ကိစ္စကို ပြည်ပက ဟိုလူလာရှင်း၊ ဒီလူလာရှင်းနဲ့ အဲဒါကိုက ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲဆိုတာ ဆောင်းပါးရှင် မစ္စတာ ဖားကြီးများ စဉ်းစားကြပါဦး။
ဆောင်းပါးရှင် တောသားလေးရဲ့ (၁၃-၈-၀၉) နေ့ထုတ် သတင်းစာမှာ “အမှန်ကတော့ တဦးနဲ့တဦး နားလည်မှု နည်းပါးပြီးတော့ သံသယတွေ မှားကြလို့ မေတ္တာရှေ့မထားနိုင်ဘဲ အာဃာတတွေနဲ့ ကြည့်ကြ၊ မြင်ကြ၊ ဆက်ဆံကြတဲ့အခါ ပြဿနာတွေဟာ မကြီးသင့်ဘဲ ကြီးထွား၊ မရှည်သင့်ဘဲ ရှည်ကြာကုန်ကြတာ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပဲပေါ့ကွာ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် မြန်မာတပြည်လုံးဟာ အချင်းချင်း ဆွေမျိုးမတော်တဲ့သူမရှိတဲ့ မိသားစုကြီးပါ။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ မိသားစုချင်း ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ သဘောကွဲပြားမှုတွေကို မိသားစုစိတ်ဓာတ်အရင်းခံတဲ့ မေတ္တာရှေ့ထားပြီး အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြရင်၊ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောသလို အိမ်ထဲကအပူ အိမ်ပြင်မရောက်ကြစေနဲ့ ဆိုတဲ့အတိုင်း အထဲမှာပဲ ပြေလည်သွားကြမှာပါ။ အာဃာတတရားတွေနဲ့ အတွင်းအပူ၊ အပြင်ကို ထုတ်ပြရင်တော့ နွားကွဲရင် ကျားဆွဲဖို့ စောင့်နေကြတဲ့သူတွေ အကြိုက်ဖြစ်ပြီး နစ်နာခံစားရတော့ တို့ပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ”…
လေသံလေးကတော့ အတော့်ကို ပျော့ပျောင်းပြီး အမှန်တရားကို အခုမှ မြင်စပြုလာပြီထင်တယ်။ ဒီစကားက ရွေးကောက်ပွဲ (၉၀ ပြည့်နှစ်) ပြီးကတည်းက ပြောရင် သိပ်တန်ဖိုးရှိမှာပဲ။
လက်နက်နဲ့ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းခဲ့ပြီ။
အာဏာနဲ့ ကြမ်းချင်တိုင်း ကြမ်းခဲ့ပြီ။
တပည့်ကြံ့ဖွံ့တွေမွေးပြီး ရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်၊ သတ်ချင်တိုင်း သတ်ပြီးခဲ့ပြီ။
ဥပဒေမဲ့ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခဲ့ပြီ။
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ ချမ်းသာချင်တိုင်း ချမ်းသာခဲ့ပြီ။
အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ (မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး) အများဆုံးအဖမ်းခံရ၊ အနှိပ်စက်ခံရ၊ အသတ်ခံရ၊ ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေ အပို့ခံရ၊ ပြည်သူ့အတွက် စတေးခံခဲ့ကြရတာတွေ။
ဒီနေ့အထိ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေဟာ လူမသတ်ခဲ့ဘူး၊ ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းမဖက်ခဲ့ဘူး၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အလွဲသုံးစားမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ပြည်သူက လေးစားတယ်၊ ယုံကြည်တယ်၊ အားကိုးတယ်။
(၁၄-၈-၀၉) နေ့ထုတ် သတင်းစာက ဆောင်းပါးရှင် မန်းသာစိန် (ဖာပွန်) ရဲ့ “မေတ္တာကို မေတ္တာနဲ့သာ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကတော့ မေတ္တာတရားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး နောင်တရတဲ့ လေသံမျိုးပါ။
“ပြည်သူအားလုံးကတော့ တဦးမေတ္တာတဦးမှာဆိုသလို တချိန်က အာဃာတဟောင်းတွေ၊ ဆန့်ကျင်လိုမှုတွေကို သင်ပုန်းချေကြပြီး၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံး၊ အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာ စုစည်းညီညွတ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တက်ညီလက်ညီ လက်တွဲချီတက်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်” လက်ခံစရာပါ။ ကောင်းပါတယ်။
မေတ္တာဆိုတဲ့ တရား။ သည်းခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်း ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားရဲ့ သင်္ကေတ။
မေတ္တာရဲ့လက်နက်၊ မေတ္တာရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ ဘယ်သူလဲ။
အနှစ် (၂၀) လုံးလုံး မေတ္တာတရားကို အခြေခံပြီး အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ အာဃာတမထားရေး၊ သင်ပုန်းချေရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မေတ္တာလက်နက်ကို ကိုင်စွဲလာခဲ့ကြတာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း မေတ္တာရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာက ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုအပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင် မေတ္တာသမားကြီး မဟတ္တမဂန္ဓီဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တာပေါ့။
မေတ္တာတရားကိုင်စွဲထားတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အာဏာရှင်လက်နက်ကိုင်သမားရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ (၁၄) နှစ်ကျော် (၁၅) နှစ် နေခဲ့ရတာကတော့ ပယ်ဖျက်မရနိုင်တဲ့ သမိုင်းရဲ့ကမ္ပည်းမှတ်တမ်းမှာ အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန် တင်ကျန်ရစ်မှာမလွဲပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို အသက်ပေး၍ ရယူပေးခဲ့သည့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သမီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စာနာထောက်ထား၍ ညှာတာမှု ပြုလိုပါသည်ဟု ဆိုလျှင်…
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုမှာ ပေါ်ပေါက်လာစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါ။ အင်မတန်ကြီးမားလှသည့် ရက်စက်ရာကျသော တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ စိမ်းလဲ့ကန်သာ (၅) လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ပြစ်မှုကြီးနှင့်စာလျှင် ယခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု သည် ပြောပလောက်စရာမရှိပါ။
မေတ္တာတရားကိုအခြေခံပြီး တချိန်က အာဃာတအဟောင်းတွေ၊ ဆန့်ကျင်လိုမှုတွေကို သင်ပုန်းချေကြပြီး နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံး အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာ ညီညွတ်ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲလျှောက်လှမ်းကြ မယ်ဆိုရင်…
(၁) တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် မညီမျှတဲ့ အချက်များ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန်။
(၂) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားအားလုံးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်။
(၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးရန်။
မေတ္တာနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သာ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကို လှပစေမည်။